HGH Thailand - Human Growth Hormone - Chii ichocho?
NeHGH Thailand November 02, 2018
1 Chii chinonzi HGH kana Human Growth Hormone - Somatropin?
2 Mhando nemhando dzeHGH
3 Migumisiro yeHGH pamagetsi
4 HGH kusangana nemamwe mahomoni
5 HGH kusangana neurotransmitters
6 Chiito chevhithamini uye amino acid paHGH
7 Dambudziko reAmino Acids paHGH System
8 Physiological stimulators yeHGH secretion
9 Kushandisa HGH mukugadzira muviri uye kuwedzera urefu hwevanhu
10 Kushandiswa kweHGH mukurapa
11 Kushandisa somatotropin mune zvemitambo
12 Human Growth Hormone nekenza?
13 Tarisiro yekuvandudzwa kweHGH
Chii chinonzi HGH kana Human Growth Hormone - Somatropin?
Kusvika iye zvino, Human Growth Hormone (HGH) ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye inobatsira vanabolic zvinodhaka. HGH yakawana kushandiswa kwayo kwete kungofanana nekugadzirwa kwemishonga yakanakisisa yekugadzira muviri, vashandi vehuviri hwemasisita, kukura kwemisimba, asiwo mune dzimwe mimwe mitambo yakadai sebhokisi, bhora, basketball nemimwe mitambo yemitambo uye nhabvu
HGH yakaita zvakanaka pakuvandudza mitambo yekuita - yakadai sekuwedzera kutsungirira, kurapa kukuvara. Nhamba yeHGH iri kukura zuva rega rega, nenzira yakarurama nekushandiswa kwe somatropin (HGH) zvinokwanisika kugadzirisa mutambi wenhabvu, kushanda, muviri, kushivirira uye kuderedza nguva yekudzoka
Sei muviri wedu uchida HGH zvakanyanya? C shanduro yechiLatin "Soma" zvinoreva muviri. Somatotropic zvinoreva chimiro kumuviri uye muviri wechokwadi wezvakabva. Munguva yekukura kwevanhu, HGH ndiyo yakakura hormone kukura hormone inokonzera kukura uye chimiro chemuviri womunhu, zvinyorwa uye kugadzirwa zvakananga zvichienderana nekukura, kukura, kuyerwa, kuwedzera kwehomoni mumumuviri unokura, kana munhu achikura .
Mushure mekutsvaira kwemafurotilaginous emasaga, kwenguva yakati mapfupa anoenderera mberi kukura muhupamhi, asi nzvimbo dzakadai sejaya riri pasi, mhino, tsoka, maoko, nezvimwewo hazvisi pasi pekushambadzira muhupenyu hwomunhu wacho
Muzviitiko zvisingawanzoitiki mumuviri muduku, kuchengetedzwa kweHGH nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kunowedzera zvikuru, saka pane nyaya apo vana vanokura kusvika pakukura kukuru uye kunyange zvakanyanya kupfuura mamita 2. Parizvino, pasi pekutarisa kwechirongwa mukuongorora kwehupenyu hwekukura kwehomoni, kururamiswa kunogona kuitwa, kune vana vanotambura nekushayikwa kwekuderera-kukura kuzvidzora, kuwedzera kukura kwehomoni mune zvipfeko kana, zvakare, kuti zvishoma nezvishoma pasi pakagadzirwa somatotropin
Kune munhu mukuru ane muviri wakakwana, HGH inobata vanabolic uye inokonzera zvirongwa zveprotini muzvikamu zvose nematukisi. Uyezve, HGH inomanikidzwa nehomoni, mumamiriro ezvinhu anokonzera huwandu hweHGH hunokura zvakasimba iyo inobatsira muviri kuti ufambise mapuroteni kunyanya muzvivako zvemasero evanhu
Vanhu vane mushumo wakanaka uye musimboti wakasimba kazhinji vanoramba kusagadzikana nekuzvidya mwoyo uye vanofanirwa mune iyi HGH
Nokushayikwa kwekukura kwehomoni mumuviri wemwana, vana vanokura zvikuru, kunyange zviyero zvishoma. Nekushaiwa kweHGH munhu mukuru angatanga kuwedzera marudzi ose ekuderera, kana kunyange nyika inogona kuguma murufu
Chinhu chiduku pamusoro pechirwere chepituitary - chirwere chepituitary ndicho chikamu chemukati chechimiro chechimiro uye chiyero che cherry, chiri panheyo yechehenya uye inoshandiswa pakugadzirwa kwemhomoni yehomatotropic nezvimwe, zvakadai sehutori-stimulating hormone ( kunokonzera chirwere chetachiona), adrenocorticotropic (inoita kuti adrenal glands), gonadotropic (inobatsira gonads), uye nezvimwewo.
Iyo gland yepituitary inotungamirirwa zvakananga ne hypothalamus, inobereka hurumende nemashizha. Zvakakosha kubhadhara kuti hgh inobva mahomoni maviri - somatoliberin uye somatostatin, somatoliberin hypothalamus inowedzera kubudiswa kwekukura kwehomoni neyo pituitary gland
Somatostatin, pane zvinopesana, inononoka kuchengetedza kwekuwedzera kwehomoni, pakupedzisira kana tichida kuwedzera huwandu hwekukura kwehomoni inokosha kana kuti kuwedzerwa muwandu we somatoliberin kana kuderedza zvinyorwa zve somastatin
HGH inogona kukanganisa masero ari mu test tube muzvikamu 2000 nguva dzakakwirira kudarika muviri. Mumuviri wakajairika, HGH inoshanda chete pachiropa. Chiropa chinounza insulini-yakafanana nekukura, iyo inonziwo somatomedin. Somatomedin - anewo anabolic uye kukura kwechiitiko, ichikanganisa masero anoshandiswa.
Sekuchiremba, ini ndinowanzoona zviitiko kana mushure mekurwara kwechiropa chakanyanya mwana anorega kukura uye mamiriro akafanana nepituitary nanism inoitika, kunyange zvazvo chirwere ichi chakadaro chinokonzerwa nekushaiwa somatomedine.
Kune rumwe rutivi, acromegaly inowanzoenderana nehuwandu hwehutachiona hweropa muropa. Chirwere chiri munyaya iyi chinokonzerwa nehuwandu hwepamusoro muropa re somatomedine.
Nenzira yakawanda, ketani yekutonga kwevanabolism ne somatotropic hormone inoshandiswa kumakumbo emakumbo ndeaya:
Pamusoro pevanabolic action, somuenzaniso, nokuda kwekukura kwemasumbu, tinogona kushandisa nzira dzakasiyana-siyana:
1) iyo yakajeka uye yakakosha inoshandiswa nguva dzose kumuviri weHGH
2) Wedzera chiyero che somatoliberin mu
3) Deredza chiyero che somatostatin
4) Kuzivisa mumuviri somatomedin
Mune mamwe mashoko, funga somatotropin mutemo uye somatotropin
HGH kunyanya peptide hormone, ine nhamba yakakwana ye amino acids 191 makundi. Muna 1921, chiito chekukura kwehomoni chakashandiswa kumhuka, chiitiko chacho chaive gigantism chaiyo apo yakatanga kubudiswa kusina kukodzera kwerebhendi yekare yepituitary gland. Izvi zvinopfurikidza nemapiristologist zvakananga zvakaratidza mukana wekuwedzera kukura kwechimiro chechidiki.
Muna 1944, HHH yakanatswa kubva pamhuka, munhu somatropin yakatanga kusarudzwa kubva ku1956 uye yakatanga kushandiswa pakubudirira kwevanhu vashoma, gare gare masayendisiti akacherechedza 3 maitiro eHGH ane maoko ezvimwe masero
Chinhu chakanaka chekushandiswa kwekuwedzera kwehomoni yakawana kushandiswa kwayo mu basketball, kukura hormone yakatanga kushandiswa mukurima kwekugadzira bateketi kupfuura 2 mamita
Kusunungurwa kwekukura kwehomoni kunowanikwa nepamusoro pezvikomo mukati mezuva kubva pa 6-12 peaks, kazhinji huwandu hunoitika panguva yekushanda kwepanyama, mamiriro ezvinhu akawandisa, kushanduka kwekushisa uye munguva yehope, apo yakakwirira-carbohydrate zvokudya inotorwa, kuchengetedzwa kweHGH kunoderera
Zvimwe zvidzidzo zvekukura kwehomoni zvakaratidza kuti kukura kwehomoni yezvisikwa zviduku hakuiti zvachose zvakakwirira mhuka. Semuenzaniso, hormone inokura yevanhu inopindura zvakanaka kune vembongoro nezvimwe zvipfuwo, apo zvinopesana neHGH monkey kana mhou haibatsiri muviri wemunhu zvachose
Mhando nemhando dzeHGH
Kwemazuva mazhinji HGH yakagamuchira uye ichiri kugamuchira kubva kune zvitunha zvevanhu, mune dzimwe nyika kunyange mitemo yakasarudzwa yakapfuudzwa maererano neyekuti mushure mekuvhura kwomunhu planditary gland inofanira kuendeswa kunzvimbo dzakakosha yekugadzirisa. Iye zvino HGH yakadzidza kugadzira uye kugamuchira zvepamusoro
Muna 1963, kwekutanga, United States yakagadzira chirongwa chehurumende chekuunganidza kwezvitunha zvemuviri wepituitary pamwe nekugadzirwa kwechirwere-hutachiona hwekukura kwehomoni
Mune 1964 muBaltimore yakatanga sangano rekuzvidira "kukura kwomunhu" kubatsirwa uye kusununguka kwekusununguka kwevanhu vashoma vanotambura nokushaiwa somatropin, asi munguva pfupi iri kutevera vamwe vevanhu vane utano hwakanaka hwekuwedzera kukura zainetrisovalsya kukura kwevanhu vane makomo evabereki vari pasi vanoda kuwedzera kukura kwevana vavo, nokudaro kuisa chido chikuru kune mishonga inopika
Kuzivikanwa kwekuwedzera kwevanhu hormone zvishoma nezvishoma kwakatanga kuwana mukurumbira, vabereki vakatanga kutenga vana vavo veHGH kuti vaite vabereki vavo vhiki dzepamusoro, hupenyu hwavo hwekuwedzera hune hormone hwakaratidzawo pachavo mukurapa zvirwere zvakakomba zvakadai sekupisa, mapfupa emapfupa, mune ramangwana, kukura kwehomoni kuchawana kushandiswa kwayo kune imwe nzvimbo yakawanda yepreexisting uye kurapwa kwezvirwere
Uyewo, kukura kwehomoni kwakawana kushanda kwayo mumitambo, saka kuwedzera kudiwa, izvo zvisingaiti asi zvinokanganisa mutengo wekukura kwehomoni mumusika nekuwedzera
Kuzivikanwa kwekukura kwehomoni munyika kunowanikwa mukurumbira nezuva rose rinopfuura uye rine mikana yakawanda yekushandiswa uye kukura, saka kukwidziridzwa kwevanhu kukura kwehomoni kunokodzera nekuda kwekuita kwakanaka pasina migumisiro
Kusvika iye zvino, kambani yepamusoro yezvinodhaka yemishonga inozivikanwa semushambadzi wepasi rose wemishonga Pfizer, inobudisa yakanakisisa kukura hormone pasi peGenerot Genin, iyo chete yekusvitsa kwechirwere ichi inorema
Iyo yepasi rose yeHGH 0.9 mg ndi3 IU kana 1 IU ndeye 0.3 mg, muyero wevarume wevarume ndeye 0.9 mg kana 3 IU kana pane 0.6 yakakwana kana 2 IU yevakadzi, nokuda kwevanabolic effect uye kukurumidza kukura kwemisimba kunogona kuwedzera muyero ku2-3 IU
Sezvo zvidzidzo zvakaratidza kushandiswa kwekukura kwehomoni mumangwanani musina chinhu chisina chinhu uye musati nguva yekurara ine mamiriro akafanana, murwere anokwanisa kusarudza kubva mune mararamiro uye mararamiro. Uyezve, zvidzidzo zvakaratidza kuti kugovana kuwedzerwa kwezuva nezuva muzvikamu zve 2 kune zvakakonzerwa nekutora muzere wezuva nezuva mu dose imwe
HGH inoshandiswa pasi pemutana kuti ive nyore munharaunda yepamu 2-3 mm, asi chaizvoizvo inogona kuiswa mune chero chikamu chemuviri, pfudzi, gumbo, asi mudumbu ndiyo inonyanya kusununguka uye inorwadza, imwe HGH inotyisa mumatambudziko nzvimbo, tichifunga kuti nzvimbo iyo mishonga yakatungamirirwa ichashisa mafuta nokukurumidza, haisi, zvakakwana zvinokonzerwa nekuita chero chikamu chemuviri
Mavhareji emakore ekurapa, kupora ndeye 5-8 mwedzi, kupfuura mwedzi ye8 HGH inenge isisina simba uye inofanirwa kupedzisa kosi kana kumira
Nhamba yevakadzi uye iyo yekurapa ishoma kudarika varume, nokuti HGH inoshanda kuvakadzi zviri nani uye zvakanyanya kubudirira, nekuda kwezvikonzero zvakawanda, kusangana nemamwe mahomoni, kuwedzerwa kwakanaka, kuyerwa, musimba mutsara muchidimbu, nezvimwewo.
Chikadzi gepophysis inounza huwandu hwekuwedzera huno kupfuura huri mutumbi, kuwedzera kune vakadzi vose vanonyanya kufunga nezvekukura kwehomoni inobvumira vakadzi kuendesa dhidiki duku kubudirira kumwe chete
Mhedziso yeHGH pamagetsi
Zvichida chiito chinonyanya kukosha chinokura hormone ine protein synthesis, pakutanga kwechiropa, ropa nemisungo. HGH inokonzera vanabolic effect se steroid yakasimba, kukura kwehomoni kunowedzera kupinda uye kutakura amino acids kumisungo, nekunyatsoshanda mumuviri wekurovedza muviri, masisita emasumbu anokura uye anokonzera, zvichiita kuti kuwedzerwa kukuru mumisasa mizhinji
Kukura kwehomoni kunogona kugoverwa mu 2 peptide zvikamu, chikamu chokutanga chine anabolic effect, yechipiri mafuta inopisa simba, pane zvose, kune kuwedzera kwekuchengetedzwa kwezvirwere uye kuvandudzwa kwakawanda mumabasa emuviri. Kuwedzerwa kweprotheni pamwe nekukura kweHGH, kukwanisa kwayo kukurumidza kukura kwemapfupa murefu, kusvika pakuvharwa kwezvikamu zvepamusoro, uyewo kukura kwemapfupa muhupamhi mushure mokunge mapuranga akavharwa
Muhutungamiri hwemaduku uye mashizha mashoma, kukura kwehomoni kunowedzera kuperesa kwemasero kuisa glucose uye kunova nemigumisiro yakafanana ne insulin. Iko yepurotini inowedzera mune pancreas, nokudaro inokonzera kuwedzera kwekugadzira insulini. Kana uine hukuru uye hukuru huwandu hwekukura kwehomoni, kuwedzerwa mune shuga yeropa kunowanikwa, zvinogona kuitika kuti dystrophy ye pancreas inoderedza kugadzirwa kwe insulini, ndiko kuti, kupfuura maitiro makuru ekukura kwehomoni kunogona kukonzera chirwere cheshuga
Kuderedza kweadipose tissue, hormone kurapwa kwekuwedzera kukura kwakaratidza chiitiko chakanakisisa pasi pemamiriro ekurovedza muviri uye cardio, inotungamirira kumagetsi panguva imwechete inopisa musimba kukura
Kuwedzera hormone kunovandudza hutano hweropa hunotaura nezvekuvandudzika kwemapuroteni-maitiro ekupfura marrow
Mineral metabolism - pakutanga kwekurapa nekukura kwehomoni, kunonoka kwephosphorus uye potassium mumuguta unoitika, iyo inoratidza chirongwa cheprotein
Calcium nehuwandu hwayo huri kuwedzera, uye kuderera kunowanikwa, izvi zvinoratidza kuumbwa kwemutsva mutsva uye kusimbisa kwekare mapfupa emapfupa. Chiratidzo chekukura kwemisimba mumuviri kunowanikwa mukuchengetedzwa kwe phosphorus mumuviri, kuwedzera kune anabolic yekutakura hormone isimba rinopesana nemakumbo. Chero ani anotanga kutaurira STG kuitira kuti aite sangano revanabolic pakarepo akaona gonho rekudya.
Kune vakawanda, izvi zvinotyisa, sezvo kukura kwemisasa mukunzwisisa kwavo kunofanira kusanganiswa nekuwedzera kwechido, asi kwete nenzira yakafanana. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakaratidza kuti kupesana kwekakuvadza kwekukura kwehomoni kunogona kupfuudza zvakananga vanabolic effect.
Nokudaro, maererano nepfungwa yezvinhu, kushandiswa kwepurasitiki hakufaniri kuwedzera, asi kuderera.
HGH kusangana nemamwe mahomoni
Apo utachiona hunoita basa, muviri unoita zvakanyanyisa zvakanyanya pakuiswa kweHGH kubva kunze. Muchiitiko ichi, kuti zvive nehuwandu hwehutano hwehutano hwakanaka, zvakakosha kutanga kururamisa basa rehutachiona hwehutachiona (mumutungamiri wekuwedzera kwayo). Izvi zvinogadziriswa kuburikidza nekupa mahomoni ehutachiona (haasi kuvhiringidza) uye zvimwe (adrenomimetic) zvinodhaka.
Zvakakosha kuti kune varwere vane hyperthyroidism (yakawedzerwa utachiona basa) huwandu hweHGH muropa hunogara huchikwidziridzwa. Kubudirira kwekubudiswa kweHGH muzhizha kunogara kwakanyanya kudarika munguva yechando, nokuti muzhizha, kune kuwedzera kwechimiro chechirwere chetachiona. Inotamba basa uye inowedzera kunzwisiswa kwemashupu kusvika kumahomoni ehutori.
Kazhinji kacho, thyroidin inoshandiswa, yakagadzirwa kubva kune zvakasvibira zvehutachiona zvezvipfuwo. Kunyanya kazhinji, maitiro akafanana, sa triiodothyronine (triiodothyronine hydrochloride) uye L-thyroxine. Kugadziriswa kwemasanganiswa ane zvikamu zveL-thyroxine ne triiodothyronine zvinowanikwawo.
Zvinonyanyozivikanwa ndezveti tireocomb, thyrotomy, uye cythel.
Zviduku zviduku zveadrenal cortex hormone (glucocorticoids) zvinowedzera kukanganisa kwekukura kwehomoni kune zvigunwe. Dhura huru, pane zvinopesana, inoderedza. Uyezve, mamwe maitiro e-glucocorticoid hormone anogona kudzivisa zvachose kukura uye anabolic zvinokonzerwa ne somatotropin. Dzimwe mhando dzepituitary nanism (dwarfism) hadzisi yechiratidzo chekuti pane zvishoma somatotropin mumuviri uye kwete kuti chiropa hachiiti zvakakwana somatomedin.
Uye izvozvo, uye imwe inogona kunge yakakwana. Kuwedzera kweglucocorticoid adrenal glands nekuda kweA ACTH hypersecretion neyo pituitary gland ndeyekupomerwa mhosva.
Glucocorticoids inogadzirisa migumisiro ye somatomedin uye somatotropin pamasero emagetsi, pamwe, uyezve, inoderedza kuchengetedzwa kweGH nemasero eosinophilic emutambo wepituitary.
Glucocorticoids kwete kungovhara migumisiro ye somatotropin. Mushure mokunge vaudzwa mumuviri sewe wose mumuviri we100 mg, vanodzivisa kusunungurwa kweGH mukupindura kwe insulini hypoglycemia uye kupindira kwemajoni eArginine, mushure mekudzidziswa kudzidziswa kweGH apo kutora L-DOPA kunoderedzawo.
Zvinenge zvakafanana zvinogona kutaurwa pamusoro peimwe nzira dzose dzekusimudzira kufambisa uye kusunungurwa muropa reGH uye somatomedin, pamwe chete nemigumisiro yavo yekupedzisira.
Glucocorticoids haingorambidzi matambudziko eGH. Ivo pachavowo vane catabolics. Mushure-kudzidziswa kusunungurwa kwema somototropin muropa zvakare kunodzivirirwa.
Kukura kweHemmone secretion usiku kunobatawo glucocorticoids. Iyo mikoko yekusunungurwa kwekukura kwehomoni inoita shoma pakureba uye zvishoma nezvishoma munguva.
Glucocorticoids ine simba rakaipa kwete kungoitwa somatotropin system, asiwo pahutachiona hwehutano uye nemagumisiro ekupedzisira emamwe mahomoni anonzi synergistic (enhancers) omusatotropin system.
Testosterone inowedzera hutano hwe somatotropin muvarume uye glucocorticoids, vane antagonism kune testosterone haisisiri zvakananga asi nenzira isina kuratidza kurwisa kwayo kunopesana nehurongwa hwe somatotropin.
Kana kushaya simba kweAdrenal cortex kukurudzira chiito chekukura kwehomoni, inoderedzwa pasi. Kana hutachiona hwedrenal cortex inowedzera basa rayo, kana kuvhara madhoo maduku emishonga yeglucocorticoid mumuviri. Parizvino, chete maitiro ekuglucocorticoids anoshandiswa, uye kusarudzwa kwavo kwakanyanya.
Izvi zvinowanzoitwa prednisolone, prednisolone hemisuccinate, methylprednisolone, dexamethasone, triamcinolone, hydrocortisone, hydrocortisone acetate, hydrocortisone hemisuccinate. Isa zvose izvi mishonga zvakanyatsonaka uye mune zviduku zvakanyanya kuti urege kukonzera kuitika kwekasa.
Kushaya simba kweyodrenal cortex inonyanya kuonekwa muhosha yaYenkoenko-Cushing, apo hyperplasia yeAdrenal cortex inopfuura kuburikidza ne hyperproduction ya ACTH uye nehuwandu hweglucocorticoids muropa rinopfuura mitezo yose inofungidzirwa uye isingafungidziki. Zvinokwanisika kufungidzira chirwere chaYenkoenko-Cushing chete kuburikidza nekuona kwomurwere.
Ichokwadi ndechokuti kuiswa kwemafuta pamuviri wevanhu vakadaro kunhu hunhu. Mafuta anonyanya kuiswa pamatama, mimba, mapande uye zvigaro. Uturu hwemakumbo nemakumbo zvakasvibiswa, uye zvinopesana nechemberi kwechidziro chikuru uye zvigaro, izvo zvinotarisa zvinotarisa kunyange zvishoma kudarika zvazviri chaizvo. Mhuka dzomunhu akadaro dzakafanana nepeari. Kuiswa kwemafuta kunzvimbo dziri pamusoro nekuda kwekuti kune nhamba yakawanda ye insulin receptors.
Insulini inopa chikamu chekuita kweglucocorticoids maererano neprotein metabolism, asi panguva imwechete, inopindirana nemagumisiro anoita steroids maererano nemafuta emasabolism.
Kunyanya glucocorticoids mumuviri kunogona kuitika kwete panguva yekurwara. Hypertrophy yezvinonzi grenal adrenal inogona kukura nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Inogona kukura mushure mekuita pamuviri, mushure mekunge uchingodzokorodzwa, mushure mekuguma kwechirwere chechirwere chisingaperi (kazhinji mapapu kana toni), mushure mezvose, nemhaka yezvikonzero zvehutano. Hapana chimwe chezvinetso mumhupenyu wemunhu zvinopfurikidza pasina tsanangudzo yezvinyorwa zvebonderedze zvishoma zvishoma, asi zvakanyanya. Nehafu yechipiri yehupenyu, vanhu vazhinji vanotanga kufanana nepeari mumashoko avo emitumbi yavo. Izvi zvinonzi Itsenko-Cushing's age syndrome.
Usati watanga kukura hormone therapy, zvinyorwa zveglucocorticoid muropa zvinofanira kuderedzwa pasinei nokuti iri chirwere cheCushing, kana cushingoid syndrome chero yakabva.
Maitiro akakura eYyenko-Cushing zvirwere zvinorapwa zvakanyanya.
Imwe yezvinyorwa zvinonzi adrenal inobviswa, uye imwe yacho inogadziriswa nedanda reutron. Chirwere ichi chinotora sechanza. Dambudziko rakaoma, pamwe chete ne cushingoid syndromes, rinorapwa zvakakodzera. Ipa zvinodhaka zvinoderedza basa reAdrenal cortex.
Mutungamiri munyaya iyi mishonga yakadaro seAminoglutethimide (syn. "Orimeten"). Aminoglutethimide yakanaka nokuti pamwe nekudzvinyirira adrenal cortex, inoderedza kushandiswa kweserogen mumuviri uye saka ine nzira isina kukodzera uyerogenic effect.
Izvo zvisina kujeka uyerogenic effect inokonzerwawo nekuti glucocorticoids inodzvinyirira basa re androgens zvose pamasero uye maitiro. Kurega kudarika glucocorticoids, aminoglutethimide inhibits chiito che androgens.
Kubudiswa kwemavara: mahwendefa e0.25 g.
Inogadzirwa 0.25 g, 2-4 dzimwe nguva pazuva.
Migumisiro yechirwere ishoma uye inongoratidzika chete muhutano hwehutachiona, izvo zvinokurumidza kupera nekubviswa kwemishonga.
Mukuwedzera, aminoglutethimide ine basa reanticonvulsant.
Chloditan (syn. "Mitotane") imwe mishonga inoshingaira inopesana nebasa rekortical nzvimbo ye adrenal glands.
Kubudiswa kwemavara: mahwendefa e0.05 g.
Inotorwa nemuromo, kutanga na 2-3 g zuva nezuva mumazuva okutanga e2, uye zvino pamyero we 0.1 g / kg uremu hwehutano hwezuva nezuva. Nhamba yezuva nezuva inopiwa mu 3 doses mu 15-20 maminitsi mushure mekudya. Migumisiro yakawanda inowanzopfuura kupfuura paunotora aminoglutethimide.
Nausea, kurasikirwa nechido, kushaya musoro, kugona. Kana zvikaitika, chirwere chacho chinongopedzisira chichikwanisa kusvika pamwero apo mushonga wacho unoregererwa.
Zvose zviviri aminoglutethimide uye chloditan ndezvokutanga zvinorwisa-catabolic agents. Dzimwe nguva dzinoshandiswa sechirongwa chekuvaka musuru.
Parizvino, mune mishonga yemishonga yemunyika yedu kune zvikuru 2 marudzi ekupedzisira-kuita insulin: munhu (genetically engineered, yakagadzirwa nebhakitiriya synthesis) uye porcine (inowanikwa kubva kumapapanati epakcreatic yenguruve mukugadzira-kugadzira michero). Zvisiri zvishoma zvinowanzozivikanwa ndeyemhando yechitatu, whale insulin, yakabva pane pancreas ye blue whales.
Nguruve insulin, kunyange zvazvo inodhura zvikuru kudarika insulin yevanhu, haisi yakaderera muhuhu huri uye inogona kushandiswa pamwe chete kubudirira kumwe chete.
Chikamu chechiito che insulin ndechekuti inoderedza zvikuru shuga iri muropa. Dambudziko rose rekushandisa insulini nzira ndeyokuita kuderera kwemashuga eropa zvakakwana zvakasimba kuitira kuti kusunungurwa kwe somatotropin kuwedzere uye panguva imwechete isingakwani zvakakwana kuti munhu atadze kuziva.
Insulini inotanga kugoverwa zvakanyatsorongeka, nediki duku (4 U) subcutaneously. Kana kurovedza muviri kuri mangwanani, ipapo insulin inojowa mushure mokunge urovedza muviri. Kana kudzidziswa kuri manheru kana masikati, ipapo insulin inotangwa mangwanani uye mutambi wacho anotanga kurovedzwa chete mushure mokunge insulin inopera. Zuva rimwe nerimwe, chirwere che insulini chinowedzera ne 4 IU uye zvichiri mberi kusvika muyero wacho unosvika ku60 IU. 60 U igero rakachengeteka apo pasina munhu mumwe chete akambonzwa kurasikirwa.
Kusiyana nedzimwe hutachiona hwema-hormone, insulini haina hurongwa hwehutongi. Nokudaro, kuiswa kwe insulin haisi kudivi uye kunodhaka.
Zvinoshamisa kuti, kunyange vanachiremba vazhinji havazivi izvi. Mune kliniki yepfungwa, ndaifanira kutarisa varwere vairapwa ne-insulin comas. Mamwe acho akabatwa ne 240 IU ye insulini zuva rega rega ndokubva arega kurapwa kamwechete. Hapana chakaitika shure kweizvozvo. Kwete kuvhara zviratidzo, hapana zviratidzo muzvakaitika, nezvimwe zvinhu zvisingafadzi.
Kunyangwe pane zvinopesana, kana chirwere cheshuga cheropa chakanga chichikwidziridzwa (prediabetes) vasati vapora insulin, chirwere cheshuga cheropa chinodzokera kune chakanaka mushure mekuchengetedza insulini. Kana chirwere cheshuga chaive chakapfumbira, chaifunga kuti chitarisiko chinowanzoonekwa, etc. Kuporesa ne insulini haisi kungokonzera kwete zvakaipa, kuparadza kunoparadza mu pancreas, asi zvinopesana kusimbisa pancreas, uye inowedzera maitiro ayo (iyi inotangira own insulin).
Insulin senzwiki yakasiyana nevatambi vakasiyana. Nehutachivi hwepamusoro hwehuga, vamwe havanganzwi kunyange mushure mokupa 20 IU ye insulini. Zvinonzwisisika, kwavari iyo yakawanda yakachengetedzwa yakakwirira yepamusoro haizove 60 IU, asi 80 IU. Nehutachiona hwehutachiwana hwehutachiona hwehutachiona hwehutano hwehutano, muviri wekunzwika kune insulin, pane zvinopesana, inogona kuva yakakwirira kwazvo. Kutanga kwe insulini mumamiriro ezvinhu akadaro kunotanga kwete ne 4, asi ne 2 U uye kuwedza mubairo kwete zuva nezuva, asi kamwe kamwe kwemazuva 2-3. Iyo yakawanda inotenderwa kuyerwa haisi kupfuura 40 U per injection.
Pane mamiriro ekutanga anotarisa paradoxical, apo, sezvinoitwa kurapwa ne insulin inowedzera, kunzwisisika kwayo hakuderedzi, asi, pane zvinopesana, zvinowedzera. Saka, somuenzaniso, kusvika pakuenzanisa kweiyo ye60 U, munhu anoerekana atanga mushure mechinguva kuti aone kuti chiyero ichi chakakwirira nekuda kwehupirinicemia yakawandisa.
Zvishoma nezvishoma, kuderedza chirwere chezuva nezuva chakakonzerwa ne insulin, inomira pa 40 U, yakawanda zvakakwana, asi pano zvakare "kushamisika" kunomumirira. Mushure mechinguva, aya 40 U akave akawandisa zvakare uye mubairo inofanira kuderedzwa zvakare. Kuita kwakadai kune insulini inotarirwa kubva kunze kunongobvumira kuti inonzi insulin yakajeka inosimbisa mapapiro ayo uye inoita kuti kuve nekuwedzera kwekugadzirwa kwemuviri (insulin). Zvinonzwisisika, neizvi, chidimbu che insulini, chinotungamirirwa kubva kunze, chinowira.
Kune nzira mbiri dzekutungamirira insulin - dzakanaka uye dzakaoma. Maererano nenzira inonyorera, insulin inojowa mushure mekudya, uye yakaoma pane isina chinhu. Kuzivisa insulin pane chisina chinhu mudumbu kunogona, zvechokwadi, kukonzera kusunungurwa kwakakura kwema somototropin. Asi nzira yakadaro inowedzerawo mungozi nekuda kwedambudziko guru rekuwira mu-hypoglycemic coma.
Nokudaro, achishandisa nzira yakaoma, insulini inogona kugoverwa nemumwe munhu anokwanisa kuwana kunze kwekucherechedza kwekanguva maawa 1.5-2. 1.5-2 maawa mushure mekuvharwa kwe insulin, munhu anocherechedza uye ipapo zvokudya zvinotakurwa. Kucherechedza kunokosha kuitira kuti abvise munhu kubva ku-hypoglycemic coma, kana akawira mariri. Kurega kubva ku hypoglycemic coma kunoshandiswa uchishandisa maitiro ekugadzirisa kwe 40% glucose solution, kana chirwere chemukati che 1 ml ye 0.1% adrenaline solution. Dzimwe nguva vanoita zvose pamwe. Chokutanga, adrenaline, uye ipapo, kana isina kubatsira, ipapo glucose.
Zvokudya zvinotakurwa pamucheto wekuiswa kwe insulin inonetsa. Mhando imwe neimwe ye insulini ine zvikamu zviviri. Rimwe boka rinongotarisana chete nemafuta, uye imwe - pamwe nemafuta neprotini imwe panguva imwe chete. Sezvo mutemo we insulin substrate chiito, zvinhu zvose zvichatsigira
crystalline amino acids famba zvakananga kumisungo. Ikoko, semugumisiro wekuita zvakakwana mumuviri, zvinowanzobatanidzwa muprotheni-maitiro ekugadzirisa. Zvimwe zveamino acids pakutanga "dzakashandurwa" kuva mapuroteni muropa. Zvadaro mapurotini aya anotakurwa kuenda kumisungo.
Zvokudya kutakura neamino acids zvinokonzera zvinetso zvitatu zvakakomba.
Dambudziko rekutanga nderokuti pure crystalline amino acids inodiwa zvikuru.
Izvo zvakanaka uye zvisinganzwisisiki zvinosarudzwa munyaya iyi ndeyokudya chete nekristalline amino acids uye hapana chimwezve. Izvo zvine mutoro wezvokudya zvekuti insulini yose ichaenda pamwe chete ne "protein path", uye ichapa kuwedzera kwemaonda musimba pasina kuwana mafuta. Zvisinei, kugovera kwe pure crystalline amino acids chete kunodhura zvikuru uye, nokuda kwezvikonzero zvehupfumi, hazvibviri zvikuru.
Mukuwedzera, mushure mokunge uwedzere insulini, iyo yakakosha ye nitrogen inogona kuchengetwa mazuva ose aya. Zvose zvakakwana zveamino acid muzvokudya zvinofanira kuwedzerwa kusvika ku 2-3 g pa 1 kg yehutatu hwehuviri, uye dzimwe nguva zvimwe. Zvose zvinoenderana nezvinangwa izvi mutambi wacho akazviisa. Munguva pfupi yapfuura, kune huwandu hunowedzera hwezvesayenzi kuti huwandu hwakanaka hwe nitrogen yehutano hahudi huwandu hwe1.7 g yeproteni pa 1 kg yehutatu hwemuviri.
Zvisinei, iyo inonzi neurotransmitter inosanganisira mamwe amino acids, kukwanisa kwavo kubatanidzwa mune simba retimetabolism, chiito-chakasimba chekuita kwezvokudya, nezvimwewo hazvifungi pano.
Dambudziko rechipiri nderokuti pure amino acids inonyanyisa kubvisa hypoglycemia. Nokuda kwekusunungurwa kwakakwana kwe hypoglycemia, zvishoma nezvishoma mazana ehydrohydrates anodiwa, asi zvinongoda kuidarika, sezvo ma carbohydrates anobva atanga kuisa insulini pamwe chete ne "mafuta". Mushure mezvose, "nzira" ye insulini inotungamirirwa, sezvatinoziva, kunyanya nechikafu chezvokudya.
Dambudziko rechitatu nderekuti kune vanhu vane atrophic gastritis, kana kuti asidi yakaderera yechipfuva chemuviri, crystalline amino acids inokonzera kuora mwoyo. Ne zero acidity - chirwere chechokwadi. Zvakakosha kuedza kusarudza yakawanda yekristalline amino acids iyo mutambi anogona kutora pasina mimwe migumisiro yega pachake.
Ivhareji yezvokudya sarudzo inoshandiswa ndeyotevera. Zvakakosha kuedza kuratidza kuti maererano ne1 / 3 yezvokudya zvakakwana ndeye crystalline amino acids, kana amino acids ne peptides, 1 / 3 chikamu-protein powders, uye 1 / 3 chikamu cheprotein. Amino acids ne peptides inodhura kudarika yakachena amino acids uye inonakidza (zvose pure crystalline amino acids dzine unhu husingafadzi zvikuru uye zviri nani amino acids, zvakanyanya kuvanwa).
MaProtini powders haafaniri kushandiswa kusvikira aongororwa. Vagadzirirei kuhutano hwembatata yakasvibiswa. Iyo inoda chaizvo mazai eprotein, nokuti ine maine amino acids uye inonyatsoenzaniswa. Uyezve, maererano nehuwandu hunobatsira, mukaka unobva ku casein, nyama, soy uye mukaka whey protein. Nokuda kwekukurumidza uye kwakakwana kudyiwa kwemapuroteni, pamwe chete nazvo zvakakosha kushandiswa kwemagetsi enzymes.
Pasi pemamiriro ezvinhu akadai, chero mapuroteni anoda maawa akawanda kuti kudya kwakadaro, uye hapana nguva yekumirira shure kwe insulin. Zvakakosha kuzadzikisa kupinda kweamino acids muropa nokukurumidza sezvinobvira kusvikira kushanda kwe insulini kwamira. Izvo zvakagadziriswa zvakanyanyisa zvine utachiona hwemakemikari pane pancreatin, festal, enzistan, mezim, trienzyme, nezvimwewo. Muitiro wangu unoratidza kuti zvakanakisisa zvezvinodhaka izvi ndezve "festal".
Zvakakodzera, zvakakosha kudyira zvishoma 100 - 150 g ye pure crystalline amino acids mukati me6 maawa ekutsigira insulin, uye kana zvinhu zvepfuma zvichibvumidza, saka zvimwe.
Kana zvigadzirwa zvisingabvumi kushandisa chete amino acid uye mapuroteni kuti uwane zvokudya, saka iwe unofanira kungoedza kungoita puroteni kudya, kuderedza kudya kweakagidhyidhi kusvika kudiki uye zvachose kubvisa mafuta kudya.
Kana insulini ichijowa musina chinhu chisina chinhu, zvino zororo re hypoglycemia rinofanira kutanga nekutora amino acids, kuishambidza pasi nechinguva chemvura. Kana hypoglycemia isiri yakanyatsomiswa, iwe unogona kutora gorosihydrates nyore nyore uye mumari yakafanana iyo inogona kukwana kumira hypoglycemia. Zvinyorwa zvinokonzerwa ne-carbohydrates panzvimbo yekusika glycogen depots zvichaenda zvakananga mumuviri weadipose uye izvi zvinofanira kuyeukwa. Pasinei nenyaya haigone kudyidzana ne-complex carbohydrates "kusvika kumarara".
Hapana asi kuneta kunobatsira. Mufananidzo wakajeka weiyi ndivo vanokwidza sumo, avo vari kuwana huwandu hwakawanda hwemafuta pamwe nekubatsirwa kwehydrohydrate rinotakura pamucheto we insulin. Nokuda kwekununurwa kwe hypoglycemia, mitambo yakanwa yakasvibiswa mumvura inonyatsokodzera carbohydrate (carbohydrate) kutakurwa kana kudya kwekakinhydrate iri kure uye panguva yekurovedza muviri.
Mune vanhu vane hutano hwakakura hwemamiriyoni evanhu vari mumuviri, kuwedzera kwemafuta kunogona kudarika kuwedzera kwemisumbu pamwe nekukanganisa kudarika mumutoro wezvokudya (kufambisa kwemafuta nema carbohydrates). Mumunhu akadaro, mafuta anonyanya kuiswa mudumbu, kumativi, matope uye matama.
Zvose zvakaoma zvekutakura kwezvokudya pamucheto we insulin zviri mukuti iwe haugone kuchengeta makhahydrates, chikafu chinofanira kunge chave chakanaka zvachose mapuroteni.
Asi rimwe zuva ndakaona nyaya inoshamisa mukuita. Mumwe mutambi akazotanga kupinza insulin mukati meamino acid mutoro akakurumidza kuwira ndokuwira pasi kusvikira adzokera pane zvaaidya, izvo zvaisanganisira kuwandisa kwemakrohydrates.
Yaiva pazvokudya zvakadai zvekuti akawana muviri wakaoma musinga pasinei nemitemo yose inofungidzirwa uye isingaoneki yehutano. Kune chero munhu upi noupi, kudya kwakadaro pamucheto we insulin hakuzokonzeri chimwe chinhu kunze kwekuneta.
Kushandiswa kwe insulin yevanabolic zvinangwa zvakaoma uye zvakazara kuti ndakazvitsaurira bhuku rakasiyana naro. Shanduro itsva yebhuku rino ichangobuda ichidhindwa pasi pechinyorwa. Anabolism ne insulin II Ona chirevo pane peji yekupedzisira yevhavha.
Kukurukurirana kwakawanda uye kukakavadzana ndiro dambudziko rekubatanidza insulin uye kukura hormone. Mushure mezvose, mumabhuku ose ezvinyorwa zvebiochemistry mune chitsauko chakasiyana, icho chinonzi "mahomoni eConinsular".
Shanduro yepamutemo inofunga zvakare somatotropin kuti ive yekare yakasiyana-hormone, asi ini ndatove ndatsanangura kusanzwisisika uye kusanzwisiswa kweshoko iri. Ndinodzokororazve zvakare: madhidiki maduku eHGH anongogadzirisa chete pancreas, pasina kukonzera kukuvadza. Maitiro makuru chete eomatatroprop anogona kukonzera chirwere cheshuga mellitus, uye chete kana pane chimiro chekuberekwa kweizvi kune izvi.
Ngatitii tave tatoziva mamwe maitiro ehutachiwana hwechirwere cheshuga, uye kuwedzera hormone kuchiri kudiwa. Chii chaunofanira kuita? Tsvaga shuga metabolism, pamusoro pekuvanzwa kana zvakajeka chirwere cheshuga. Izvi hazvisi zvakaoma zvikuru, sezvo pane zvakajeka uye panguva imwechete mabhuku ekuongorora mabhuku. Kutanga, zvakakosha kuita ruzivo rwemuropa uye urinho yehuga. Zvose zvinongororwa zvinoshandiswa mangwanani pamusana musina chinhu.
Ropa remunhu ane hutano pane dumbu risina chinhu rine 4.4-6.6 mmol / l (80-120 mg%) yeglucose. Murwere ane chirwere cheshuga mellitus anogona kuwedzera kukosha kwa28-44 mmol / l (500-800 mg%) kana kupfuura.
Zvisinei, muzvikamu zvekutanga zvechirwere cheshuga kana kuti maitiro ayo akaoma (uye isu tiri kutaura chete pamusoro pematambudziko akadaro), kutsanya shuga yeropa hakuregi kudarika, uye hakusi muurini. Nokudaro, kuongororwa kweropa nyore kwehuga hakusi chiratidzo chakakwana chemagidhahydrate metabolism. Kuongororwa kwakajeka kwakanyanya kuongororwa kwePTH kwekuregerera (kushorwa) kune glucose. Izvo zvinoitwa sezvinotevera. Murwere anotanga kuongorora huwandu hwehuga muropa musina chinhu. Mushure mezvo anobvumirwa kunwa 50 g ye glucose, yakasanganiswa mu 200 ml wemvura. Munguva yamaawa ekupedzisira e3, sampuli yeropa inotorwa kubva kwaari maminitsi ose e30. Mumunhu ane hutano, shuga inopa muropa mushure mekunge mutoro weglucose inowedzera mukati yeawa yekutanga inenge ye50% kubva pakutanga, asi kwete kupfuura 9.4 mmol / l (179 mg%), uye neawa rechipiri inoderera kusvika kukosha yekutanga kana kunyange yakaderera zvakanyanya nekuda kwekuita basa rekudzivirira kwe insulini nepancreas ine kuchengetedzwa kwakakwana.
Mune varwere vane chirwere cheshuga mellitus, kunyange muchikwata chekutanga chechirwere ichi, kukwira kunoitika gare gare uye yakakura muhukuru. Kuenzana rekutanga rekuisa glucose hazviitiki kunyange shure kwemaawa 3.
Kunyange zvakanyanyisa zvakajeka iyo inokwana miviri inoshandiswa, iyo iyo chikamu chechipiri cheglucose muhuwandu hwe50g inobvumirwa kunwa 1 awa mushure mekutanga chikamu. Mune munhu ane utano, mutoro wokutanga unokonzera kuwedzera kwekuchengetedza insulin uye saka chikamu chechipiri cheglucose hachiitisi kukuwedzera kutsva kwehuwandu hwehuga muropa.
Nezvikwangwani pamusoro pezvisizvo vanotaura pamusoro pekuvapo kwe "hump". Kana zviratidzo zveshuga zvisadzokeri kune zvakasikwa kwemazuva mazhinji, zvino dzinotaura pamusoro pe "gorofa" girafu yemukati. Kana kudzokorora glucose kuwedzerwa kunoguma mukudzoka kunowedzera muzinga re shuga muropa, izvi zvinopa mufananidzo wekaviri-humped sugar curve.
Nhamba yehuga muropa inogona kuvimba nenzira yekusanganiswa kweropa: mu capillary ropa shuga yepamusoro yakakwirira kudarika mune inonyanya. Saka, munyaya iyi zvakakosha kutora ropa kubva pamunwe.
Kuwedzera mushuga yeropa kwete nguva dzose chiratidzo cheshuga. Zvinogona kuva mugumisiro wenguva dzose yekushushikana kwepfungwa. Kushushikana kwakasimba kunokonzera kukura kunokosha muzinga re shuga muropa. Izvi zvakasimuka uye zvakadzika midzi mukugadzirisa kwekushanduka-shanduka, sezvo mumamiriro ezvinhu anotambudza munhu nguva dzose anoda simba rakawanda kana kurwisa kana kuti kudzivirira kuitira kutiza, shure kwezvose.
Mumuguta, shuga inowanikwa chete kana ropa raro rinosvika pakakwirira kwazvo uye itsvo haigone kurarama nekutsvina. Kune rumwe rutivi, kuonekwa kwehuga mumuguta pamwe nehuwandu hwehupenyu huri muropa hakugoni kutaura nezvechirwere cheshuga, asi nezvehutano hwetsvo. Nevamwe
kune zviratidzo zvechirwere cheshuga. Muchidimbu, panikreas inokurudzirwa nemafuta acids, izvo zviri muropa zvakanyatsoenderana nemafuta ari mumuviri.
Pamusana pezvinyorwa zvepolly lipolysis, mafuta anowanzosvika pakupinda mumafuta acid uye glycerin, iyo inowedzera ropa, uye ipapo pasi pesimba re insulini zvakare inobva kuropa ichienda kune zvinyorwa zvemadii, apo mafuta asina kubatana anoumbwa. Mushure mokubviswa kwehuwandu hunorema, zvose zviratidzo zvehuga yeropa zvinowanikwa. Nokuda kwechinangwa chekutsvaga shuga metabolism, unofanira kunge usisina zvachose chemadii adipose.
Sechiremba anobatsira, ini kazhinji ndaifanira kutarisana nechiitiko chinonakidza mukuita.
Mune vanhu vane osteochondrosis yemucheche musana, shuga yevhaga mushure mokunge mutoro usingasimiri uye unofananidzwa nemutemo, asi kwenguva yakareba hauyi kusvika pakutanga. Kutendeukira kune mabhuku ezvidzidzo, ndakaona kuti chiitiko ichi chave chichizivikanwa kuvakiriniki kwemazuva mazhinji, asi kurapwa kwacho hakuna kukonzerwa nemumwe munhu. Nesimba rebasa rangu, ndaiwanzosangana nechishamiso cheshuga yakasvibirira mumakumbo uye mubhokisi. Izvo zvakananga zvemitambo iyi ndeyekuti osteochondrosis yepervical spine inokurumidza zvikuru. Nokuda kwekurwisana izvi izvi zvinokonzerwa nekushanda kwe "bhiriji yekutarisana", uye nekuda kwebhokisi nekuda kwezvinoramba zvichirova kumusoro. Vanhu vashomanana vanoziva kuti kurohwa kumusoro kunokuvadza mutsipa zvakanyanya kudarika musoro pachako. Kunyangwe kushanduka kwemadiki kwemusoro kunoshandura vertebrae.
Panguva imwecheteyo, midziyo yemutsipa iyo inofudza medulla inonyanyiswa. Icho chiri mu medulla oblongata kuti nzvimbo dzehuga yehutari dziripo. Kubva pano uye kukanganisa kwayo mufananidzo wehutu hwemashuga. Kutambudzwa kwechirwere chepervical musana pamwe chete ne gymnastics yakakosha kunobatsira kuunza shuga yenguruve zvakare. Zvinotoshamisa ndezvokuti nzira yekurapa nediki shomanana ye insulini kana zvimwe zvinodhaka zvinoderedza shuga zvinomhanya zvakanyanya zvinowanzoita shuga yevhuga, kunyange pasina kuchinja mutsara wekervical.
Cervical factor "kazhinji haikwanisi kuderedzwa. Pamwechete kurapwa kwechirwere chepervical spine iri kutakura mutoro mukuru kudarika lumbar.
Nokudaro, zviratidzo zvekutanga zvechirchio osteochondrosis zvakaonekwa kune vanhu vakatotanga kubva munguva ye16. Musoro unotendeuka kuva chinhu chakaoma kwazvo. Mune nzira yekushanduka-shanduka, hatisati tine nguva yokugadzirisa kuisunga. Cervical osteochondrosis semugumisiro wekushayikwa kwepistertebral cartilage inowanikwa kunyange pasina kusina kwekunze kwekunze kwezvinhu. Chii chatingataura pamusoro pekuwedzera mutoro!
Kana tsvakurudzo isingaratidzi kudarika kana kuti isina chirwere cheshuga, ipapo somatotropin inogona kushandiswa. Saka, tinogona kudzokera kumubvunzo wedu wokutanga: zvinoita here kuunganidza insulin ne somatotropin, uye inonyatsokosha here?
Kana mumwe mutambi akagadzirira kugadzirisa zvirongwa zve insulin oga uye anowana zvakagadziriswa zvaanogutsikana nazvo, hapana chikonzero chekubatanidza chero imwe insulini-yakafanana neanabolic agents ku insulin.
Kana munhu achingoshandisa kukura kweHymmone uye ane simba rakanaka rekukura kwayo, hapana chimwe chekutya pamusoro. Iwe unogona kunyatsopa ruzivo rwemishonga yekurovedza nemumwe mishonga pasina kubvisa firiji nemakani muzvinyorwa zvakajeka. Izvo zvinogona kutaurwa nezve steroids. Kana pane zvakakwana zvavo ivo chete, saka, kuvonga Mwari, kugadzirira kweimwe rimwe boka kuchaenda kunotevera.
Mamiriro akasiyana zvachose achamuka apo bedzi mishonga yakanyanya haikwanise kugovera zvinoda simba. Rega ndipe muenzaniso: mutambi anowana kukura kwakanaka uye kwakakurumidza mumasisita mashoma kubva kune insulini chete, asi ... rimwe guru "asi" rinomuka: kuwedzera uku mumasumbu inosvika nemafuta akaenzana e-subcutaneous fat.
Mumwe murume haana kuwanikwa musimba nokukurumidza, anofarira insulini, asi haana kutora mafuta zvakakurumidza, uye handidi kukanda insulini. Uye pano somatotropin inouya pakununura. Desi duku ye somatotropin inobatsira kushandura insulin kubva kumafuta kusvika kuprotini. Zvadaro kuwedzera kwemasisita mashoma kuchave kwakanyanya, uye kuwedzera kwemafuta hakusi.
Tora mumwe muenzaniso. Mumwe murume akasarudza kushandiswa kwezvemapurisa sematototropin nekuti, panguva imwechete yekuwana musimba wehutu, anoda kuporesa kukwegura kwepamuviri. Cartilage ndeye 100 nguva dzinonzwisisika kune somatotropin, kana kuti, pane somatomedin, uye chisarudzo munyaya ino chinogadziriswa zvakanaka. Asi kunyange pano pane imwe huru "asi" - somatotropin inodhura zvikuru, uye zvakawanda zvayo inoda zvakawanda zvakakwana kwemaitiro ose ekurapwa, uye nekuda kwekukwirira kwayo, inowanikwa kakawanda kupfuura mamwe mishonga yose. Basa rekukura hormone rinogona kuwedzerwa nekuzvibatanidza naro nediki shoma re insulini uye thyrocalcitonin.
HGH kusangana neurotransmitters
Neurotransmitters vapindi vehutano hwemashupa kubva kune imwe sero cell kusvika kune imwe. Endorphins uye catecholamines vane simba rakasimba pane kutanga uye kuchengetedzwa kweHGH. Catecholamines ndivo vamiririri vekutenderera kwezviratidzo zvekunyengedzera kwehutano mukati mehutano hwenheyo. Mhedziso dzinonyanya kukonzerwa neurotransmitters catecholamines inonzi dopamine, norepinephrine, adrenaline (iyo inonziwo hormone ye adrenal medulla). Iketani ye catecholamine biosynthesis inogona kushandiswa sezvinotevera:
Sezvaunogona kuona, zvakakosha amino acid tyrosine inogona kugadzirwa kubva kune inokosha amino acid phenylalanine. Pasi pemabasa e enzyme tyrosinase, L-DOPA (dioxophenylalanine, kuruboshwe) yakagadzirwa. Chikamu cheL-DOPA chinoenda pakuumbwa kwemaranin (iyi ndiyo iyo iyo pigment inopa ruvara kune bvudzi, iris, ganda, uye dzimwe nhengo dzenherera), uye chikamu pakuumbwa kwedopamine, iyo norepinephrine uye adrenaline ikozvino yakagadzirwa.
Panewo mhinduro pakati pe melanin naL-DOPA.
Iyo yakanyanya nervous system melanin inoshumira semhando yekuchengetedza nzvimbo, kubva pane iyo, kana zvichidikanwa, zviwanikwa zveL-DOPA zvichazadzikiswa. Asi adrenaline uye L-DOPA vanobudiswa nenzira yakachena. Kana iwe uchida kuwedzera muwandu we dopamine kana norepinephrine mumuviri (CNS), izvi zvinoitwa zvisina kurongeka.
Pane-uye b-adrenoreceptors yemasero. Makakateni ega ega anogona kuita zvose zviri zviviri uye rumwe rudzi rwekugamuchira, zvichienderana nematairi inoshandiswa.
Kukurudzirwa kwe-adrenoreceptors kunoita kuti kuwedzerwa kusunungurwa kwema somatotropin nehupenzi hwepituitary. Kukurudzirwa kwe b-adrenoreceptorov, pane zvinopesana, inhibits. Kune rumwe rutivi, kubviswa kwe-a-adrenergic receptors kunotadzisa kubviswa kweHGH, uye kubviswa kwe b-adrenergic receptors kunowedzera kuchengetedzwa kwe somatotropin.
Adrenaline inokanganisa zvose-uye b-adrenergic receptors, iye zvino inogadzirwa zvakagadzirwa. Pinda it subcutaneously. Nhamba yakakura uye yakakwirira yeAdrenaline inokurudzira HGH kusunungurwa, nokuti vanoita zvakasimba pane-adrenoreceptors pane b-receptors.
Microdose adrenaline inosanganisira zvikuru b-adrenergic receptors. Zvinyorwa zveHGH muropa hazviwedzere, asi hazvisi kuderedza zvimwe. Mu "pre-steroidal epoch", vatambi, vasati vadzidziswa, vanozvibaya ivo pachavo neadrenaline, nokudaro vachiwedzera kukutsungirira mukugadzirira kudzidzisa uye, panguva imwe chete, kuwedzera jet kudzidziswa kudzidziswa kweHGH.
Kupindirana kwe norepinephrine kunobatanidzwa zvakananga. Noradrepalin inokurudzira a-adrenoreceptors, kuwedzera kusunungurwa kweHGH muropa nekupa
zvimwe zvinhu zvose zvine mafuta akajeka anopisa. Nhengo ine simba zvikuru iyo inoita kuti kusunungurwa muropa re norepinephrin is ephedrine. Iyi yekugadzirwa kwemishonga inowanikwa kubva ephedra horsetail uye inoshandiswa maererano nemhando chaiyo. Inowanikwa nenzira ye ephedrine hydrochloride. Imwe nzira ine simba yekusimudzira nhararenrenic structures ndiyo yohimbine alkaloid.
Tora kubva pamakwenzi eimwe yemiti yeAfrica. Inowanikwa nenzira ye yohimbine hydrochloride.
Dopamine inoshanda zvikurukuru kune-adrenoreceptors. Nhanganyaya kumuviri wezvinodhaka dofiminostimuliruyuschee chiito chairo haitungamiri kuwedzera mune huwandu hweHGH muropa, asi kusunungurwa kweHGH mukupindira kwekuita basa kunowedzera, izvo zvinonyanya kuwedzera kukwanisa kwekudzidzira. Zvinoshamisa, neAacromegaly, kushandiswa kwezvinodhaka zvinokurudzira dopamine synthesis, pane zvinopesana, zvinoita kuti kuderera kwaro kusunungurwa kwakanyanya.
Izvo zvinowanzoshandiswa zvinoshandiswa zvinowedzera kushandiswa kwe dopamine mumuviri ndeyi: mbeu yealkaloid bromocriptine (parlodel), L-DOPA (dioxyphenylalanine - chibereko cheamino acid phenylalanine). Uyezve, zvakaitika kuti L-DOPA pachayo inotora basa rinokosha muCNS secheurotransmitter. Kwenguva yekutanga, L-DOPA yakashandiswa nevaAmerica mumitambo yemitambo. I amino acid phylalalanine, inotorwa mumatokari akakwana, inoshandiswa sechinhu chinowanzobatanidzwa mumuviri weL-DOPA, iyo inozoshandurwa kuva dopamine pamwe neketani rose rekushandura (dopamine> noradrenalin> adrenaline). Dofomin inogonawo kugadzirwa kubva muamino acid tyrosine.
Tyrosine, yakafanana ne phenylalanine, inowanzoshandiswa mune zvemitambo uye zvekurapa munyika dzakawanda.
Muitiro wekushandisa L-DOPA pane imwe nguva yakawanda kare. Izvi zvinokonzerwa nekuti L-DOPA yakazviratidza pacheche mumakiriniki ekudzidzira mukurapa zvirwere zvakawanda zvakakomba. Pakutanga, L-DOPA yakashandiswa muPalinson's disease uye parkinsonian age (senile ruoko kudengenyeka).
Zvadaro zvakazoitika kuti mishonga isiri yakaipa inobatsira kuporesa munhu kubva pakuneta kwehurongwa hwemagetsi, hwakakonzerwa nezvimwe zvekunze zvinoderedza zvinhu. Zvose zvinogara pano hazvibatsiri uye munhu haagoni kuita pasina mishonga yakanaka. MuMoses Clinical Specialized Hospital №8 anonzi ZP Solovyov pane kliniki yeurourosis. Neurosis - kupesana kwekanguva kweGNI, iyo inoitika mushure mekunyanyisa kukuru. Dzimwe nguva nenyuchi dzinopera uye dzinonetsa kubata. Kubvira ku80 yezana remakore rechimakumi maviri. Nyanzvi dzinotungamira zvekliniki dzakabudirira kushandisa L-DOPA chirwere chechirwere (0.5 g kamwe pazuva kwezuva 10) kana kukanganiswa kwenheyo yenheyo.
Maererano nekucherechedza kwatinoita, L-DOPA inopa chibereko chakanaka pakurapa kwevanhu vasina simba, nokuti inowedzera kunzwisisika kwemasero kune mahomoni epabonde. Mhinduro yakanaka yakawanikwawo mukurapa kwemarudzi akasiyana-siyana ekudengenyeka kwekutya kunokonzerwa nerouropsychic yakanyanya kuderedza.
Kubvira pakati pe-70, vanhu vokuAmerica vakatanga kushandisa L-DOPA mumitambo uye vanoramba vachiishandisa kusvikira zvino. Kana iwe ukatora L-DOPA mangwanani, inonyatsopindirana mumashizha ezuva nezuva. Panguva imwecheteyo, shure kwekudzidziswa kuchengetedzwa kweHGH kwakawanda zvikuru. Zvinonakidza kuti L-DOPA chete inoshandiswa pasina kudzidziswa haina simba paHGH system.
Ne acromegaly, kutora L-DOPA, pane zvinopesana, kunoderedza kunyanya kuporesa kwekukura kwehomoni.
Mumusika weUnited States wemitambo yezvokudya zvekudya zvinoramba zvichizara nezvinhu zvekutengesa zvine L-DOPA. Ichokwadi, vose vane rimwe zita. Dzimwe makambani akazvichengetedza pachake kuti anogadzira mahwendefa ane L-DOPA pasi pezita remapill kukura hormone (!) Kana "pill IGF-1" (insulini-yakafanana nekukura). Kuti urege kuwira nekuda kwechikwata chinodhura, iwe unofanirwa kuongorora nguva yakarongeka yemishonga yaunopiwa.
L-DOPA chinhu chakanaka, pasina mubvunzo, asi hazvikwanisi mari yakabhadharwa neHGH uye IGF-1. Matafura eHGH uye IGF-1 haagoni kunge aripo, nokuti aya ndiwo mapeptidi anobva apedzisira aputirwa mumutsara wepamuviri.
Zvakakosha kuti L-DOPA ine simba rekuvhiringidza. Kubva pakati pe-1980s, pane murayiridzo wepamutemo kubva kuHurumende yehutano pakushandiswa kweL-DOPA mune tsika yezvokudya, izvo zvisinei, hazvisi kuteverwa, sezvo zviri nyore nyore kusarudza murwere nokutanga kurapa uye zvichityisidzira nekushanda kunouya.
Kukanganisa kwechirwere ndechekuti inotyisa kune chiropa.
Munyika yose, L-DOPA inowanika mumapiritsi uye makiritsi e0.25 uye 0.5 g. Somunhu, sachiremba, ndakasangana naye mumapiritsi e0.5 g.
Kana zvikaitika kudarika, kushungurudza uye kurutsa zvinogona kuitika. Inokonzerwa nekuwedzerwa kwedopamine, iyo inoumbwa kubva kuna L-DOPA mumuviri.
Dopamine inokwanisa kukonzera chirwere chekurutsa, chiri mu medulla oblongata.
Vakadzi vava pedyo ne2 nguva dzinonyanya kunzwisiswa nemishonga kupfuura varume, vane chirongwa chinonyanya kukosha chekurapa, uye kusarudzwa kwemazi kunotanga nechinguva chiduku. Muvarume, kusarudzwa kwemuti waro wakatanga ne 1 tablet in 0.5, uye mune vakadzi vane? mahwendefa, ane dozi ye0.25 g
Iyo yakawanda yemishonga ine L-DOPA ikozvino inowanika munyika yese mukurapa chirwere chePasinson. Muzhinji vavo, L-DOPA inosanganiswa nezvinhu zvinodzivisa kuparadzwa kwayo pari pfupi. Saka zvimwe zvinodhaka zvinopinda muuropi.
Hongu, uye chiitiko cheL-DOPA chinogona kuderedzwa. Mune mishonga yakadai seNACOM, L-DOPA inosanganiswa ne benzerazide. Vose carbidopa uye benzerazide zvinodzivisa kukanganisa kweL-DOPA muropa uye mutsva dzomukati. Saka zvakawanda zvinoenda kuuropi. Kusarudzwa kwemazizi emishonga iyi inofanira kuitwa zvakanyatsonaka, kutanga ne? mapiritsi, zvimwe zvisingafaniri kuderedza chishuvo nekurutsa. Izvi zvinoshanda kumapoka ekurapa uye zvemitambo. Ndinodzokororazve zvakare kuti kuwedzera kweHGH kusunungurwa pasi pekuita kwemishonga iyi kuchaitika bedzi kunze kwemashure ezvakanaka zvishoma, zvakashata zvepamusoro-shanduko yekushanda (kana zvisina kudaro hakuzovi nemugumisiro zvachose mukusimudzirwa kweHGH kusunungurwa).
Mumitambo yemitambo, b-adrenoreceptor blockers inowanzoshandiswa. Kune rumwe rutivi, vanowedzera kuchengetedzwa kweHGH, uye kune rumwe rutivi, kuwedzera inzwi rehutachiona hwepasympathetic, iyo inokonzera zvirongwa zvevanabolic mumuviri. Nhamba ye b-adrenoreceptor blockers ikozvino inoshandiswa mumishonga yemitambo yakakura zvikuru. Chokutanga pane zvose, iyo anaprilin (obzidan), whiskey (iprindolol), trazikor (oxyprenolol) nezvimwe zvizhinji. Chaizvoizvo, zvinoshandiswa mumitambo uye mumitambo iyo inobatanidzwa nekuratidzwa kwekutsungirira kwakakura - kushambira, kutamba, kutsika, uyewo.
Izvi zvinokonzerwa nekuti b-adrenergic receptors inowedzera kuwedzera kwemwoyo. B-adrenoreceptor blockers panguva imwechete kuwedzera simba rezvipikiso zvemutsipa wemwoyo.
Endorphins inguva ichangobva kuzaruka yevashandi vezvematongerwo enyika. Izvo zvinobudiswa nehuturo hwepituitary, vane morphine-soro (narcotic uye analgesic). Endorphins ikozvino inogadzirwa nemaitiro. Idzo mazana nemazana ari nani kupfuura morphine mumagariro avo.
Kunyange zvakadaro, inofananidzwa zvakanaka neyekupedzisira mukuti havasi kupindwa muropa nekuremerwa. MuUnited States, endorphins yakashandiswa mumakiriniki uye emitambo yemitambo kwemakore anopfuura 20. Endorphin yakasimba kune b-endorphin. Yakatanga kuumbwa mu 1975. Iyo polypeptide inosanganisira 31 amino acid masara.
Zvose morphine uye endomorphins zvinokonzera kuwedzera kukuru muhuwandu hweHGH muropa. Izvi zvinosanganiswa nemigumisiro yavo pamusana pekudzivirira kwe somatoliberin ne hypothalamus.
Mukuwedzera, vanowedzera kuumbwa kweDNA, zvakanyanya kuderedza kushandiswa kwemagetsi, chimiro chemuviri chepasi. Kuderedza kushandiswa kwemasabolism kunokonzera kukanganisa kwakanyanya kwe catabolism uye, pamwe chete ne-somatoliberin-stimulating nemigumisiro, ine simba rakasimba yevanabolic inoshandiswa uye hupfumi hwezvokudya zvose zvepasi.
Morphine haigoni kushandiswa mumitambo yemitambo, hongu, asi b-endorphin inofanirwa kutarisirwa. Kana ichitarirwa mukati, b-endorphin inogona kukonzera kuwedzera kweplasma HGH level nechimwe che20-30 (!). Hapana rimwe shanduro iye zvino ine izvi. Ichi chemishonga ine ramangwana rakanaka.
Zvinokonzerwa kukonzera kuwedzerwa kwehutano hwe b-endorphin nemuviri pachawo kuburikidza nemugumisiro unorwadza (DBE). DBV inokonzerwa nekugadzirisa muviri, yakawanda yebasa rinosungirirwa, Kuznetsov vashanduri, kutambanudza maitiro nemarwadzo anokonzera, nezvimwewo. Chibereko chakanakisisa ndechokurapa kweimwe nzvimbo dzomuviri ine spark discharge. Izvo zvidimbu zvekurapa zvipfeko zveyi nzira ndeyomuchina we D'D'Arsonval. Simba re spark yakasununguka rinogona kugadziriswa.
Migumisiro yamavitamini uye amino acid paHGH
Kunyange mukati mawo, kuiswa kwe nicotinic acid chete kunoderedza shuga yeropa uye kunowedzera kunzwisisika kwemasukisi kune zvose insulin uye somatotropic hormone. Vitamini PP is vitamin inogadzirisa yemhando yayo. Ichokwadi ndechokuti zvose zvisingaenzaniswi, redox kugadzikana mumuviri kunotenderera kuburikidza nemakemikari, anosanganisira nicotinic acid. Izvozvo zvinokonzerwa neNAD uye NADP inokonzera ma enzymes.
NAD is nicotinoamidine nucleotide. NADP - nicotinamide dinucleotide phosphate. Nicotinic acid, saka, inotora, iyo yakananga, uye kunobatanidzwa zvakananga mumhando dzose dzekutengesa. Mune madhidiki maduku, ane vitamini chaiyo (inodzivisa pellagra), uye mune mahombekiti makuru (megadoses), inotova nematambudziko makuru emasvomhu. Izvozvo zvinokonzerwa nemuviri wevhithamini yose zvisingaiti, zvisingaiti kubatanidzwa nicotinic acid. Izvozvo zvinokonzerwa nemuviri wevhithamini yose zvisingaiti, zvisingaiti kubatanidzwa nicotinic acid. Nekushandisa kwenguva refu, nicotinic acid inoderedza ropa rekutsvaira uye inoderedza uswa hwe soft soft cholesterol plaques.
Izvozvo zvinoshandiswa kuti vasodilating ye nicotinic acid inonyanya kuzivikanwa, kunyanya maererano nemidziyo miduku uye capillaries. Iyi dzimba ye nicotinic acid inoita kuti ive nzira inokosha zvikuru yekuwedzera ma capillari. Kana munhu achifambira nokukurumidza zvakakwana, kukura kwe capillary network kunonoka nekukura kwemashuga. Kuomesa kwemisimba fiber 2 nguva inokanganisa ropa rayo 16 (!) Times. Kusagadzikana kwakakwana kwemajeri ekuyerera kweropa kunogona kuva chinhu chinokonzera kukura kwemasumbu uye kunokonzera kupera mumigumisiro yese yemitambo. Kushandiswa kweNicotinic acid munyaya iyi kunobatsira mutambi kunze kwekusimudza.
Nicotinic acid inobatsirawo nokuti inongova nesimba rinokonzera simba pahupenyu hwose.
Kana, somuenzaniso, munhu ari kutonhorera kupemha, saka mwedzi miviri yekurapa nehombe yakakura ye Vitamin PP inomuita zvirwere zvekudzivirira kunze kwemabhadharo. Nicotinic acid inokurudzira zvipembenene zvinowedzera zvakanaka (iyo adrenal glands ine nicotinic "receptors" inogadziriswa chete ne nicotinic acid uye hapanazve) kuti kamwe mujenya wepravenous wewaini yakakura yeicicinic acid inogona kuparadza kurwisa kweAsthma. Nekugara kwenguva refu kurapwa ne nicotinic acid, hypertrophy yezvinyorwa zvinonzi adrenal uye kuwedzera kwekutsungirira kunoitika. Mutengo wemagadzirirwo emagetsi ndeye "nicotine" hypertrophy yezvinyorwa zveadrenal hazvichinje.
Nekushandisa kwenguva yakakwana ye nicotinic acid mumuviri (zvose zviri pakati nepakati yenheyo uye mumharaunda), iyo yakawanda senotonin inowedzera. Serotonin yose inonzi neurotransmitter uye murevereri wemhuka. Mune mamwe maitiro, inozviratidza semurevereri weinzwira tsitsi hurongwa hwekutya, uye mune vamwe semurevereri weparasympathetic. Icho chimwe chezvinhu zvakanaka zvinogumira (mukati) kukura hormone secretagogues. Apo munhu anovata, ropa re serotonin rinomuka uye ichi ndicho chikonzero chikuru chekuwedzera kwekuvharidzirwa kwekukura kwehomoni. Serotonin saizvozvi inosimbisa hurongwa hwekutya zvakanaka.
Kushandiswa kwenguva yakareba kwemaicotinic acid kunowedzera simba munazvo uye panguva imwechete kunoita kuti munhu apinde mukati uye ave akaenzana.
Izvo zvinonzi serotonin muNCS zvinogona kuwedzera zvakanyanya nekubatanidza nicotinic acid ne pyridoxine (Vitamin B6). Pyridoxine inotorwa nemuromo mumatafura kusvika ku 300 mg pazuva.
Maitiro makuru e nicotinic acid anogona (zvisinei kwete pakarepo) kubvisa munhu kubva kunetseka kwekutya. Sezvo munhu ane chiremba kubva kune nhoroondo ye narcologist, ndinogona kunyatsotaura zvakananga: kunonoka kwekutengesa kwe 50 ml. nicotinic acid inonyatsokwanisa kubvisa munhu kubva pakunyanyisa doro, "kuregera" kudzivisa. Nicotinic acid inobatsirawo nekuputsa heroin, asi kungosanganiswa nedzimwe nzira dzekutsvaga. Kuiswa kwemaitiro makuru akadaro e nicotinic acid inogadzirwa mumamiriro ekugadzirisa. Murwere anorara pamubhedha, ruoko rumwe rwakabatana nehutachiona hwekutengesa nicotinic acid, uye rumwe rutivi rwakapfeka tonometer, iyo inokubvumira kuramba uchitarisa ropa.
Ropa rinodzvinyirirwa pasi pekumanikidzwa kwe nicotinic acid rakaderedzwa kune vanhu vose, asi kune zvidimbu zvakasiyana. Vamwe vanotora infusion nyore nyore. Vanofanira kurara pamubhedha bedzi nokuti nzira yacho pachayo inotora nguva yakakwana. Mune vamwe vanhu pakutanga vanotarisana ne hypotension, ropa redu rinodonha zvakanyanya zvokuti ivo vanofanira kutora cordiamine subcutaneously, kana zvimwe chiedza vanaleptics. Havangatadzisi kuita kwe nicotinic acid, asi havazobvumiri kudzvinyirira kunowira pasi pezvisizvo. Kuderera kukuru muropa kunogona kukonzera kupera nekuda kwekuti uropi inowana ropa shoma, uye naizvozvo oxygen, simba uye mapurasitiki epurasitiki.
Nzira yakadaro inogona kuitwa nachiremba, asi kazhinji ichi chinopiwa kune mukoti anokwanisa anocherechedza murwere semutsvuku sekenza nekuda kwesimba rakanyanya vasodilatory ye vitamini PP.
Kuiswa kwemaitiro makuru e nicotinic acid zvinowedzera kuwedzera kwe acidity yegastric juice uye basa rekucheka kwemakemikari. Ne-atrophic gastritis, matambudziko uye zvionda zvemuviri wepamuviri, marwadzo mumatomu emimba anogona kuitika. Kune vanhu vakawanda, zvipembenene zvakavanzwa (mu 70% yematambudziko) uye vanhu vanotanga kunzwisisa kunetseka mukati mamuviri mushure mekutonga kwe nicotinic acid. Kutaura zvazviri, nicotinic acid inoratidza zvirwere zvakavanzika izvo zvisati zvamboonekwa. Nokuti iyi pfuma chete iye anogona kutotaurira "thank you".
Pyridoxine, ine kushandiswa zvine mwero, inogonawo kuwedzera zvishoma asidi yejusi yakakosha, asi kusvika pfupi zvokuti haigoni kutyisidzira chero matambudziko, kunyange zvipembenene.
Kupfuura makore emakore gumi nemana apfuura, vatsvakurudzi veAmerica vakatsanangura kukwanisa kwe nicotinic acid (vitamin PP) kuti vadzivise kupora kwepodular. Kunyanya lipolysis ndiko kuparadzwa zvachose kwemafuta emutsvina pamwe nekubudiswa kwemafuta asina mafuta (FFA) uye glycerol muropa. Zvose FFA uye glycerin inodzivisa kuchengetedzwa kwekukura kwehomoni.
Kutanga kwe nicotinic acid kunenge kuchidzivirira zvachose lipolysis, "kuchenesa" ropa kubva kuFFA uye kunokonzera kusunungurwa kwakasimba kweHGH. Chimwe chigumisiro chikuru chinowanikwa nekuiswa kwe nicotinic acid mukati, kunyange zvazvo kuitika kunoonekwa nehutachiona uye mukati mehutungamiri. Chete 10 mg ye nicotinic acid, inotarisirwa mukati, inogona kuwedzera zvinyorwa zvekukura kwehomoni muropa ne2 nguva. Mumitambo inoshandiswa, doses kusvika ku250 mg inoshandiswa mukati. Somugumisiro, chirevo chinonzi anabolic effect chinoonekwa. Muchiitiko chekuti zvakakosha kuwedzera kukura kwemutambi wechidiki, nicotinic acid ine mhinduro zvisingaiti kudarika kuiswa kweHGH mumuviri. Izvo anabolic inowanikwa muhotera huru inogona kudarika zvinoitwa nevanabolic steroid.
Izvo chete zvisingabatsiri mukushandiswa kwe nicotinic acid ndezvokuti mune iyi nyaya pane kuwedzera kwemafuta mashomanana. Izvi zvinokonzerwa chete nekudzivirirwa kwepodental lipolysis. Ichi chikamu chinogadziriswa chinoruramiswa nekudya uye "kuoma", zvichienderana nekurapa ne vitamini PP.
Chiitiko chakanakisisa pane somatotropic inoshanda yemuviri ine vitamini W kana carnitine. Akanziwo kuwedzera vitamini nokuda kwekukwanisa kuwedzera kukura kwevana vaduku. Carnitine inowedzera masero membrane kubwinya kwemafuta acids. Somugumisiro, mafuta akawanda anowedzera nyore kupinda muchitokisi, kwaanove akasvibiswa nekubudiswa kwemazana akawanda emagetsi. Carnitine, nenzira,
inobatsira kuwedzera huwandu hwakakwana hwemafuta acids, izvo pasi pemamiriro ezvinhu akaoma zvakaoma. Kuderedza kwemafuta acids muropa pasi pekuita kwe carnitine kunotungamirira kuwedzerwa kwakavharwa kweHGH nehutuko hwepituitary. Mukubatana ne "simba rekudya" semugumisiro weiyo yakakwana yeakisii yakakwana yemafuta acids, izvi zvinoita zvakakosha zvinodiwa kuti uwedzere vanabolism.
Izvo chete zvinokonzerwa ne carnitine ndeyekuti inongoguma bedzi mhuka inowedzera kukura yevana nevechiri kuyaruka, iyo inopindura nenzira inofadza kuiswa kwe carnitine kudarika mhuka yevanhu vakuru.
Vitamin K (iyo yakasvibiswa nemvura-vikasol) inokwanisa kushandisa somatotropic basa reganda repituitary. Mumuviri wechidiki unowedzera, vitamin K inogona kukonzera kubereka kwemasero eosinophilic pituitary uye kuwedzera kwakasimba kweHGH kuvhara.
Tinongoda kuyeuka kuti vikasol inogona kuunganidza mumuviri. Saka, unoda kutora vikasol course yezuva 5 inotevera ne3-day breaks. Vikasol inobata pasi kuvhara ropa, uye munyaya iyi hazvina kufanira kuwedzera kupisa kwemapurisa. Nokudaro, kudarika vikasol pasina mhaka kusingabviri. Vikasol inowanikwa mumahwendefa e15 mg. Nhamba yakakwirira yezuva nezuva yemishonga ndeye 30 mg.
Kune maitiro akasiyana-siyana e vitamini K, asi imwe chete yadzo inogadzirisa mvura. Ndiye iye akatumidza zita rokuti Vicasola (Vitamin K3).
Izvo zvevhitamini-zvakadai zvinotarisirwa kutarisirwa Zvinyoro. Shingairira semudzidzisi anoderedza mushure mekuremedza muviri, zvakadaro, inokwanisa kuderedza huwandu hweFFA muropa uye, nokudaro, kuwedzera zvishoma kuvharwa kweHGH.
Migumisiro yeAmino Acids paHGH System
Muzhinji, yose crystalline amino acids, yakarongerwa mumapiritsi, kana yakavharwa mumakutu, zvinogona kuwedzerwa kusunungurwa kwehomatotropic hormone muropa. Nokuda kweizvi, zvakasununguka, kukwana kwakakwana kwezvinhu zviviri zvakakosha uye zvisingasakoshi amino acids zvinodiwa.
Kunyange zvakadaro, pane zvakasiyana-siyana amino acids zvinogona kuwedzera muzinga we somatotropin muropa kakawanda. Asi ivo vakanaka kushandisa izvi mune mega doses (ultra-high doses). Palm inobata pano arginine.
Arginine inotsiva amino acid. Nekudonha kwepakati mumuviri we 0.5 g pa 1 kg yehuremu kunowedzera zvinyorwa zve somatotropin muropa zvisingaiti 2-3 nguva. Nhamba imwechete iyo inotorwa nemaitiro emuromo yakanyanya kusimba.
Pakutanga, arginine yakashandiswa yakashandiswa semuedzo. Izvo zvinoshandiswa zvekusununguka zve somatotropin zvakatongwa pamusoro pekuchengetedzwa kwenzvimbo yekuchengetedza zvigadziro zvehutu hwepituitary, kureva kuti wakagumisa kuti zvakakosha kupinza HGH kubva kunze, kana uine simba rehutu hwekuita kuti somatotropin ive yakakura uye inoda chete kukurudzira kwakakwana .
Mutsara iri nyore: kana huwandu hweHGH mushure mokunge kuiswa kweArginine kuwedzera zvishoma, saka pituitary haikwanisi kubudisa yakawanda yeHGH yayo uye somatotropin inofanira kuiswa mumuviri kubva kunze, kana zvisina kudaro chidimbu chinoda haana kuwanikwa. Kana mutumbi "uchibudisa" simba rakasimba, zvino ne pituitary gland zvinhu zvose zviripo. Iyo "inoshanda" uye kuwedzera, inoti, anabolism, unogona kuita zvachose pasina injenji yeHGH inodhura. Iwe unongoda kuzviita pituitary yako gland (kana kuti pane, masero eosinophilic anterior pituitary gland).
Sezvo tatove tichitaura pamusoro pekuongororwa kwekuchengetedza simba, hazvizove zvisingashamisi kuziva kuti mimwe miedzo inoitwa nemimwe mishonga yakatozivikanwa kwatiri: insulin uye L-DOPA. Insulin inotarisirwa intravenously muchiyero che 0.1 U / kg. Kazhinji, chiyero cheHGH muropa chinofanira kuwedzerwa ne2-3 nguva yakaenzana nechemberi. Apo chirwere cheL-DOPA chinoitwa, mushonga wacho unotorwa nemuromo pamuromo usina chinhu. Zvinyorwa zveHGH muropa revanhu hazvina kuwedzera zvishoma pane 3 nguva, uye kuvakadzi vasati vadarika 2 nguva (kusvika ku 20 mg / maminita 3 mushure mekushandisa madhiragi). Mumunhu mumwe nomumwe, HGH inowanikwa muropa inogona kuwedzera kusvika ku 60 ng / ml, asi izvi zvatove zvisingachaitiki.
Panewo kuedzwa ne glucagon, propranolol uye zvimwe zvinodhaka. Kuti uwane kuti zvokudya zvakadini zvemakrohydrates zvinoderedza kuchengetedzwa kweHGH mumunhu akapiwa, glucose kuderedza chirongwa ichiitwa. Mambakwedza, 100 g ye glucose inopiwa kune munhu musina chinhu chisina chinhu, uye zvino inotarirwa kuti huwandu hweHGH muropa rakaderera sei.
Kupera kwepamusoro kwaro kunofanira kuitika mumaawa 2. Uye huwandu hweHGH muropa haufaniri kuwira pasi pasi pe 2 ng / ml. Kana ikawira pasi, unofanirwa kunyatsogadzirisa kudya kwako kwegidhadhirosi mukutungamira kwaro kuderedza, kana kutsvaga
chirwere chakakomba chekuchinjana (uye zviri nani kuti zvose pamwe chete). Ne acromegaly, chirwere cheshuga, kukundikana kwechirwere, uye zvimwe zvirwere zvakakomba zvisingaperi, kuwedzera kunoshamisa kwema plasma HGH mazinga pakupindura glucose mutoro inowanikwa.
Ngatidzoke, zvakadaro, kune amino acids. Atanga "basa" rake nekuongorora zvirwere, arginine "akapinda" mumusika wemitambo yezvokudya zvekudya zvakasununguka uye sechikamu chekuwedzera. Dambudziko rega nderokuti kana rakatorwa nemuromo, arginine haina kunyanya kubudirira pane kunyanya kushandiswa. Kuti nenzira imwe neimwe iite kusunungurwa kweHGH nehutambo hwepituitary, zvinodiwa "kudya" zvisingaiti 30 g ye purginine yakachena pane dumbu risina chinhu. Chimwe chinhu chandisina kuwana mumusika wemitambo yezvokudya zvekudya, iyo maitiro ekusunungurwa aizobvumira kushandisa panguva imwechete iyo yakawanda yeArginine.
Kushandisa madhidiki maduku kunongova kuparadza nguva nemari. Iko kune michina inofanirwa kushandiswa sezvinofanira, kana kusashandiswa zvachose.
Ngationei zvino kuyeuka ketani ye catecholamine yakabva kune phenylalanine (kana kuti kubva kumamino acid tyrosine).
Cherechedza: L-DOPA inogona kugadzirwa mumutumbi zvakananga kubva pane phenylalanine, ichipfuura nechetrossiyasi. Ndiyo L-DOPA iyo ikozvino ndiyo chinhu chikuru chatinofunga pamusoro pedu sechinhu chinogona kuwedzerwa mushure-kudzidziswa kubudiswa kwema somatotropin.
Chimiro chakagadziriswa muviri kwazvo kwazvo, pamwe nekuchengetedzwa kwakawanda. Kana, nekuda kwekushaikwa kwezvokudya mumuviri, zvinokosha zve phenylalanine asiri hazvina kukwana, iyo (muviri) inotanga kuumba L-DOPA kubva kune inokosha amino acid tyrosine. Ikoko hakuzombovi nekushayikwa kukuru kweudrosine mumuviri, nokuti tinoziva kuti chero ipi zvayo inogadziriswa amino acid inogona kuenzaniswa kubva ku glutamic kana aspartic acid.
Kubvuma kuchena kwe tyrosine nokukurumidza kunowedzera zvinyorwa zveL-DOPA muNCS. Panguva imwecheteyo, kunyange kushandiswa kwemagadzirirwo ekushandura kunoshandiswa kune imwe nzvimbo pamwe nekutenderera kunonzwa kwevanhu vanotora L-DOPA. Kugamuchirwa zvishoma 2 g ye tyrosine (pane isina chinhu) inokonzera kunzwa kwekunonoka nekudzikama. Zvinenge zvakafanana zvinonzwa munhu wacho achitora L-DOPA, iyo inofungidzirwa (uye ndeyo) chibatanidzwa chekuchengetedza kwekunzwira tsitsi-maitiro ekuwedzera.
Iyo inonyanya kushungurudza yenheyo ine L-DOPA, iyo yakanyatsogadzikana hurongwa hwekutya, zvishoma iyo inogona kupera.
Nayo pachayo, kutungamirirwa kwe tyrosine hazvibatsiri kushandiswa kweHGH kana kuvhara kwayo nenzira ipi zvayo. Zvisinei, kusimbiswa kwekuchengetedzwa kweCSS uye kuwedzera kwehuwandu hweL-DOPA yakagadzirwa kubva ku tyrosine inotungamirira pakuziva kuti kudzidziswa uye mushure mekudzidziswa kuchengetedzwa kwekuwedzera kwehomoni kunowedzera zvakanyanya.
L-DOPA inogadzirwa kubva ku tyrosine muropa nechiito che enzyme tyrosinase. Nhamba dzeCNUMX dzakakosha apa. Pfungwa yekutanga ndeyekuti chiropa, kana chisina kukwana, saka zvishoma nezvishoma zvine utano, zvisinei tyrosinase inoshanda zvisina kunaka. Pfungwa yechipiri ndeyekuti tyrosinase inoshandiswa nemhangura ions. Mukutaura, hazvina basa kuti munhu anowana huni kubva kune: strawberries kana vitamini-mineral complexes. Zvisinei, nzira yechipiri inoratidzika kwandiri nekukurumidza uye nyore, kunyanya sezvo mhangura iri mune yekare "yapera", fomu yeioni.
Kugamuchira zve tyrosine kwakanaka kunopesana naL-DOPA pakuti haina kupa chero migumisiro uye haisi chepfu. Hazvizovhiringidzi mutambi chero upi noupi kuti ave ne tyrosine mumusha wake mushonga cabinet semuviri wekudzivirira. Takapoteredzwa nekutambudzika. Hapana munhu anochengetedzwa nehutsinye nezvinetso uye zvakaipa. Sei uchivabvumirira kana iwe uchigona kungotora tyrosine shoma. Uye nhaurwa dzichava dzakanaka uye mitsva yekudzidzira ichawedzera.
Kunyangwe kana tikasiya nzira yakananga ye tyrosine pane somatotropin system, tyrosine inogona kushandiswa sekungoita mutengesi mushure mushure mekutakura kwemahombekedzo ekudzidzira. Kubvira pakuona kwebiorhythmology, tyrosine inonyanya kutorwa manheru kana masikati.
Tichitarisa zvakare pachirongwa, tinogona kuona kuti kwete dopamine chete inogadzirwa kubva kuL-DOPA, asiwo maranin, rudzi rwemhando yehupuru iyo inokonzera kuveura misoro, eye iris, ganda, nezvimwe. Kana pane urombo hweL -DOPA mumuviri, melanin inoshandiswa zvishoma pane kugadziriswa kwekuchengetedzwa kweiyo central central nerve system. Nokuda kwechikonzero ichi, kunyange vana vemakore manomwe vanogona kuve vhudzi mushure mekunyanya kunetseka. Kazhinji, nguva yekuveura bvudzi inobatanidza nekushayikwa kwezera reL-DOPA. Imwe nyanzvi yakawanda yakaongorora yakaratidza kuti kuveura bvudzi kunogona kurapwa nyore nyore nokutora maitiro akawanda e tyrosine.
Zvisinei, kudanidzira "Hurray!" Munyaya iyi inenge ichangotanga. Maitiro eudrosine akanga asiri makuru, asi akazara, 1 g pa 1 kg yehutatu hwemuviri. Izvi zvakare zvinoratidza kusavapo kwe tyrosine chepfu.
Pfungwa ndeyekuti, kazhinji, kwete vhudzi rakachena. Mvere dziri nyore uye zvinonyoreswa kupora kudarika tyrosine panzvimbo yekudya nguva dzose. Bvudzi rakagadzirirwa chiratidzo chisina kujeka chekukwegura kwehurongwa hwemagetsi uye chiratidzo chimwe chete chisina kukodzera chekuderera kwe somatotropin system. Saka, kunyange mudiki zvishoma, tyrosine inobatsira senzira yekuchembera kukwegura kwepakati penheyo system.
Uye zvino, ngatitariye kuti pakutanga kweketani yose phenylalanine - inokosha yemamino acid. Kugamuchirwa kwe phenylalanine kunobatsirawo kese ye catecholamine synthesis. Pashure pezvose, L-DOPA inogona kunyatsogadzirwa kubva ku phenylalanine. Kuongororwa kwakawanda kwakaratidza kuti pane zvimwe zvakasiyana.
zvisinei kuti catecholamines inogadzirwa zvakananga kubva ku phenylalanine kana kuburikidza nehurosine maitiro epakati.
Mu biochemistry, izvi zvinowanzoitika: chinyorwa chimwechete chezviyo chinogona kuunza chimwe chigumisiro chekupedzisira zvichienderana nenguva ipi iyo nzira yacho pachayo yakatangwa. Kutanga, kuwanikwa kwe phenylalanine hakuiti kukonzera uye kugadzirisa zvinokonzerwa nehutachiona hwehurumende. Zvimwe zvakasiyana, kutora girasi yakawanda yeiamino acid inobatsira kunzwa kunzwa kuwedzerwa kwesimba, kunoderedza kushandiswa kwemazwi ose, kutadza uye kusava nehanya. Chechipiri, kunyange zvazvo phenylalanine inowedzera zvinhu zviri munzvimbo yakachengetwa L-DOPA unit, iyi L-DOPA haitungamiri kuwedzera kwehuwandu hweguruji.
Kufanana ne tyrosine, phenylalanine inotora kunze kwekudzidzira pane somatotropin system haina kuita nenzira ipi zvayo.
Zvisinei, munguva yekudzidzira kushanda, inokubvumira kuti uwane kukura kwakanyanya mukubudiswa kwema somatotropin, zvose panguva yekudzidziswa uye panguva yekudzidzisa.
Mumusika wemitambo yezvokudya zvekudya, amino acid ornithine inokurudzirwa zvakasimba senzira yekukurudzira kusunungurwa kwemaatatropin muropa. Zvisinei, dhizivo dhesi iyo inogona kusimbisa kukodzera kwezvikurudziro haisati yavapo. Uye iwe unogona kuzivisa chero chinhu.
Nyaya yemamino acid inodzidzisa nekudzivirirwa kweHGH, ndinofunga, ndeimwe yenzvimbo dzakavimbiswa zvikuru dzemitambo yemasvomhu. Mushure mezvose, HGH is peptide inoumba amino acids uye nei ichiwedzera kuumbwa kwayo kana kwete amino acids. Amino acids anopindura zvakanaka kune zvakasiyana-siyana kuchinja, uye ndinofunga kuti pane zvakawanda zvezvishamiso zvisati zvaitika kwatiri.
Physiological stimulators yeHGH secretion
Kudzidzira muviri pasina mubvunzo ndiyo yakasimba zvikuru stimulator yeHGH secretion. Pasi pemubatiro wekudzidziswa kwakasimba, zvikamu zveHGH kubudiswa mukati mezuva zvinowedzera kuwedzera uye zvinokurudzirwa mumaglitude. Kana uchivaka chirongwa chekudzidzisa, zvinokosha kufunga nezvekubatana kweHGH nemamwe mahomoni panguva yekuita basa. Iyo yakakwirira yekudzidzira kusimba, yakanyanya kusunungurwa kweHGH. Simba reEjection rinogona kuwedzera mukati mehafu yekutanga yekuvhima, shure kwaizvozvo inoderera. Panguva imwecheteyo, kusunungurwa kwemahomoni ezvepabonde uye mahomoni ehutano zvinowedzera, izvo zvinoita kuti HGH iite mishonga.
Kusunungurwa muropa re catecholamines, kunyanya norepinephrine uye adrenaline. Ichi ndicho chikamu chekutanga chekudzidzira kushungurudzika, chinangwa chekusimudzira simba remuviri masimba. Izvo zvatove zvataurwa kuti HGH inogadzirisa, "kunetsa" hormone. Insulin secretion zvishoma nezvishoma kuderedzwa, uye izvi zvine tsanangudzo yaro. HGH, mahara hormone uye catecholamines zvinopesana-izvo zvinokonesa kusununguka kwe insulini uye kushanda kwayo mishonga, zvisinei kuti insulin inodzivisa kushandiswa kwesimba reHGH pamwe chete ne catecholamines uye mahomoni ehutachiya anonyanya kuputsa chiropa glycogen, iyo inoputsika kuva glucose uye rinoshandiswa nemisungo.
Tsvina, zvinoshamisa, haigoni kushandisa glucose kubva muropa. Glucose inouya kubva muropa, iyo inotanga kuva glycogen, uye inobva yasara. Apo glycogen inopinda muchiropa ichibuda kunze kweHGH, catecholamines uye mahomoni ehutachi "anotamba" pamapupa adipose. Chokutanga, subcutaneous, uye zvakare mukati. Fatty acids ropa risingabviri, asi haishandisi zvakakodzera. Izvi zvinoda glucose, uye hapachina mari yeglucose. Muscle glycogen (nokuda kwechimwe chikonzero hakuna munhu anozviziva) haagoni kuchinja kuva glucose uye munyaya ino "haagoni kuita chero" nokuda kwekushandiswa kwemafuta acids.
Mushure memaminitsi ekudzidzira kweCNUMX (yevatangi vekutanga), albumin plasma yeropa muropa inoshanduka kuva glucose, uye glucose iyi ichangobva kuumbwa inobatsira kushandisa nokukurumidza mafuta akawanda. Vadzidzi vakarovedzwa zvikuru plasma ropa reprotein vanoshandiswa nekuda kwezvinoda simba kwete mushure me20, asi mushure memaminitsi e20 okudzidziswa. Vatambi vemusangano wekudzidzira masangano "gluconeogenesis", kureva Neoplasms yeglucose muropa, yakanyatsokura.
Vanenge kubva pamaminitsi ekutanga ekudzidzira glucose muropa kunoumbwa kubva ku fatty acids uye glycerin. Uye iyi glucose yemafuta inobatsira masumbu anoshandisa mafuta acid uye glycerin, izvo zvakanyatsokonzerwa kuti dzigadzire simba rakachengetwa nenzira yeAATP. 0.5 nguva yekushanda kwepamusoro
HGH muropa rinotanga kumira zvakanaka. Panguva imwecheteyo, hutachiona hwehomoni uye catecholamines dzinowira. Zvisinei, hutachiona hwemahymoni, inodzivisa migumisiro yeHGH, thyroxin uye hormone dzepabonde, inowedzera. Izvi zvinokonzerwa nechikonzero chokuti adrenaline inokurudzira hutachiona hwe serotonergic dzomuviri (masero emasero anounza serotonin mune imwe nzvimbo), serotonin inotanga kukurudzira adrenal cortex uye yakawanda yehomusi yeglucocorticoid inosunungurwa muropa.
Glucocorticoids inowedzera kuwedzera chiropa gluconeogenesis. Insulin secretion inoramba ichidziviswa. Chikamu chechipiri chekudzidzira kunetseka kunouya, iyo inoratidzwa nekuwedzera kukuru kwe catabolism. Iko kukura kwe catabolism kunokonzerwa nekuti glucocorticoid hormone inopedza zvikuru alanine pane zvinodikanwa zvegluconeogenesis, amino acid iyo inotora kubva mumasumbu. Izvi zvinongotungamirira kukurudzirwa kwemakwenzi matsva mumasumbu emasumbu.
Pashure peawa ye1 mushure mokutanga kwekudzidziswa, kune kakatova nehukuru hunokosha hwemagadzirirwo emagetsi pamusoro peanabolic tsvina. Nzira yekugadzirisa dambudziko racho sei? Nzira yekudzivirira sei muscle catabolism? Mhedziso iyi inofananidzira pachayo: kudzidzisa kunofanira kuva kwenguva pfupi kuti iwane simba risina simba mumashuga emasumbu uye kuwedzera kweglucose kubva kumafuta acids uye glycerol.
Kana kurovedza kunopedza nguva yakareba kudarika zvinodiwa, alanine anoenda kune simba remuviri uye zvino musimba catabolism hazvidzivisike.
Vanhu vasina ruzivo vasingatombozivi nheyo dzehutano hwemagariro mumagazini anozivikanwa vanyorera kuti zvakakosha ku "bhomba" musungo wose kwemaawa kuti uite musumbu catabolism. Uye kunyanya musumbu catabolism, kunyanya, maererano nezvavanoti, mutsara anabolism inowedzera panguva yekuzorora.
Chero zvimwe zvidzidzo zvishoma kana zvishoma kubva kuchikoro chekudzidzisa zvichakuudza kuti musimba hweshupiti huripo chete sekupindura kushaya kusimba kwesimba uye hapana chimwezve. Kana musuru inoshanda kwenguva refu, saka catabolism yemasumbu inotanga kuwedzera. Muscular hypertrophy haisi mubvunzo. Pane zvakasiyana, tsvina inotanga "kuoma."
Mukuona kwezviri pamusoro apa, zvinova pachena kuti sei iye zvino maitiro epasi rose ndekupfupisa kudzidzisa nekuwedzera kumwechete kwekuwedzera kwavo. Kuti uwane huwandu hunodiwa huwandu hwokudzidzira, kushanda kwenguva pfupi kunowanzoitwa: 2-3 nguva pazuva, uye dzimwe nguva kunyange kakawanda. Iye zvino vatambi vanodzidzisa nguva 3 pazuva kwemaminitsi e20 vasashamisi ani zvake.
Kuwedzera kwekudzidzisa kunotanga kutora maitiro asina kumboitika. Vamwe vatambi vanoita zvishoma zvakanyanya kushanda basa pasina kuparadzana pakati pezvigadzirwa. Sei zvakaitwa? Ndichapa muenzaniso wakajeka. Mutambi wacho anouya kumitambo uye anotanga kuita zvitatu: squats, deadlift, bench press. Kurongeka kwakadaro kunoitwa sezvinotevera. Kushamwaridzana kunosvika mu squats, uye kamwe pakarepo pasina kupera (!) Kushamwaridzana kunopinda mumusungo uye pakarepo pasina kupera, kushambidzika kusvika mune bhenic press. Zvadaro zvose zvinodzokorora zvakare. Kushamwaridzana kunosvika kune dzimwe nzira uye zvinotangira zvinotanga. Iyo nzira huru yekufamba kumakumbo, uye pasina kupumha, nzira huru mukufa kwekufa, uye pasina kupera, nzira huru mubheji rekunyora. Uye saka basa rose.
Mukutaura kwemasimba, kudzidziswa kwakadaro kuri kusvika kune sprint. Pot inodururira mumisasa ye 3. Mushure mokunge imwe neimwe nzira mubhidhiyo, iwe unofanirwa kupukuta bhenekeri netauro chaiyo. Hazvisi nyore kukweverwa kune zvakakwirira zvakasimba, asi mumwe haagoni kuita pasina iyo. Chokutanga, mumaawa ekutanga e0.5 ekudzidziswa, kusunungurwa kweHGH muropa (mumitauro yakawanda) yakananga zvakananga nekuwedzera. Iyo yakakwirira iyo yakasimba, yakawanda ejection. Uye, chechipiri, pasina kukwirira kwakanyanya, hazvibviri kupedzisa nhamba inodaidzwa yezvidzidzo (nzira, kudzokorora) mu 20-30 maminitsi.
Apo pakati pe-60 yezana remakore rechimakumi maviri. yakagadzirisa pfungwa huru yekukura kwemisimba, zvakazoitika kuti kukura kwemasimba mashoma zvakananga zvakaenzana nekuderera kwehuwandu hwebasa rakaitwa panguva yekudzidzira. Nguva yekurovedza haisi yega. Mune 70s, chimwe chikonzero chakaonekwa - nguva yekudzidzisa. Iye zvino, kuwedzera kwemisimba kwave kwakaenzana zvakananga nehuwandu hwehutano hwakanaka hwemasumbu uye hunopesana zvichienderana nechikamu chenguva iyo basa racho rakaitwa.
Nezvinyorwa zvakaenzana zvebasa rekudzivirira, huwandu hwakakura hwemisumbu hwakanga huri huwandu hwebasa iri raiitwa muchikamu chiduku chenguva.
Apo kuwedzera kwekushanda kwakadzika kunotanga kusvika pakuziva, kuwedzerwa kwekugadzirisa mune zvekugadzirisa kwakatanga, zvakakwana kusvika kumamfetamine-rudzi rwekusimudzira. Pasina kukurudzira, kupfupika kwekushanda kwakanyanya kwakaratidza kuti zvose hazvigoneki.
Kuti usapedza simba remagetsi, zvinokurudzira zvakabatanidzwa nedzimwe steroid iyo ine hukama hwepamusoro hwehutachiona hunotyisa kune dzimwe. Payback yakanga isiri nguva refu kuuya. Mwoyo kurwisa uye kuora mwoyo kwakatangira. Ndiani aive nenguva yekuchinja nzvimbo yemhepo valve, iye akanga ari mupenyu, asi iye haasi
rakagadzirirwa, izvo hazvisi. Vanhu vave vakangwarira. Panzvimbo pekukurudzira, vakatanga kushandura kuderedza, kugadzirisa, uye kuvimbisa, nootropes.
Vakabvumira kuti vaite basa rakawanda rekuita munguva pfupi uye vasina kunyanya kunetseka pamutsipa wemwoyo. Mwoyo wakatanga kudzidzisa zvakasiyana-uye izvi zvakakurumidza kupa chigumisiro chacho. Vakatambi vakasvika kune imwe itsva, isina kumboitika. Kubhururuka kunowanikwa kwakakurumbira kusati kwambovapo pakati pe "siloviki" uye mizimba.
2. Kurara chinhu chinokosha mukuchengetedzwa kwakakodzera kweHGH. Mukugadzirisa kwekushanduka-shanduka, maitiro emagetsi ekuponesa uye magetsi emuviri panguva yekurara kwakanyatsojekeswa. Kana munhu achangovata, huwandu hweHGH muropa hunomuka pakarepo, kunyanya munguva yekutanga ye2 maawa ekurara. Imwe yemabasa makuru eHGH ndiyo kuunganidza mafuta. Panguva yokurara, munhu haadyi, uye muviri unosanganisira nzira yekudya - mafuta. Kana panguva yekumuka muviri unodya carbohydrates uye amino acids, saka panguva yehope iyo inonyanya mafuta mafuta.
Cleavage ye subcutaneous adipose tissue uye kusunungurwa kweFFA uye triglycerides muropa inopiwa neshitatropin. Zvinonzwisisika, chikwata chinononoka uye vanabolic zvirongwa mumuviri kuwedzera. Mhando dzemakwenzi munguva yekurara dzinowedzera chete maererano neadipose tissue.
Pachinhu chiduku chiduku chehope, kuvharwa kwe somatotropin kunowona kusisina simba.
Nekurara kwakanaka, pane zvinopesana, kunodzorerwa. Izvo zvinorayirwa kurara zvishoma ne2 kazhinji pazuva zvine chinangwa chakakomba chepanyama. Kurara kwechirwere kunokonzera kuwedzera kwakanyanya mukuvhara kweHGH. Kana munhu akarara usiku uye zvichida maawa 1-2 pazuva, saka nguva yakazara yekurara kwezuva nezuva haishanduki, zvisinei, kuchengetedzwa kweHGH kunovandudza zvikuru. Chimwe chinhu chinotapira chinowanikwa kana munhu akarara 3 kakawanda pazuva.
Iyo huru yokurara iri usiku, uye masikati 2 inorara neawa 1. Nguva yose yekurara kwezuva nezuva panguva imwechete inoramba isina kuchinjwa. Mukuvapo kwe2 kuputsika kwekurara kwemasikati, nguva yeusiku kurara kwakanyatsopfupiswa.
Nzira yakanaka ndeyekubatana kwe3 pfupi kushanda kwenguva pfupi neA3 zuva rimwe nerimwe kurara. Vana vaduku vanorara 3-5 nguva (dzimwe nguva dzakawanda) pazuva. Munzvimbo dzakawanda nekuda kweizvi, huwandu hwavo hwe somatotropin hwakanyanya kwazvo, uye anabolism inokunda zvikuru pamusoro pe catabolism.
Kurara kwemasikati kunokubvumira kuwedzera kusunungurwa kweHGH. Izvi zvinowedzerawo kusunungurwa muropa remakemoni ezvirwere ane vanabolic effect, inoderedza kusunungurwa kweglucocorticoids, kuratidza chiitiko chekasa. Muzhinji, imwe nzvimbo yakanakisisa yakasikwa nokuda kwekuita kwevanabolic action ye somatotropin. Nezera, nguva yehope yakaderedzwa zvakanyanya uye kuwedzera kwayo kunoderera. Mukuenzana neizvi, somatotropin secretion yakaderedzwawo. Ndinofanira here kutaura kuti zvakaipa zvakakanganisa sei majoka-ligament, uyewo nehuwandu hwehutano huzhinji.
Mumitambo inowanzoshandiswa zvakadai se "magetsi." "Electro" chinhu chinogadzira pulsed rectangular currents yenguva dzose. Imwe electrode yakasimudzwa pamusana wemusoro, uye imwe pane maziso akavharwa. Paunotenderera chigadziro uye kukodzera kusarudzwa kwezviitiko, murwere anovata akarara ndokurara kusvikira chipfeve ichibviswa. Mune nzira iyi, ikozvino kuburikidza nemisvo yemaziso inoenda zvakananga ku hypothalamus, kusvika pakati pehope, mushure mezvo munhu wacho anorara. Electrosleep inowanzoshandiswa mukurapa kuneta, asi inogonawo kushanda seimwe nzira yakakwana yokurara kwemasikati kana kurara hope panguva yakaoma pane chimwe chikonzero.
Nekubatsirwa kwezvinhu zvinosarudzwa zvokusara, kunyange electroarcosis inogona kukonzerwa - kurota kwakadzika kwakadaro kunobvumira kupindira kwekuvhiya.
Apparatus for electrosleep and elektronarkoza zvisina kururama zvinowanzoshandiswa mumakiriniki nemitambo. Vanokwanisa kutora mishonga yakawanda, uye zvichave zvakaoma kuiveresa se doping.
Nekubatsirwa nemagetsi e electrosignic, zvinokonzerwa kuvhara zvinodhaka zvakananga muuropi, izvo zvine hutano, hutsika, hurizve huripo kana hune huwandu hwehutachiona. Izvi zvinoitwa zvakajeka: padhi yepamusoro inosvibiswa nemhinduro yemishonga inodiwa uye inoshandiswa kumeso. Kana nguva yashandurwa, mishonga inopinda mukati memucheto iwoyo we midbrain (hypothalamus umo kurara kunoumbwa) kuburikidza nemakumbo emagetsi ane mishonga, kureva pakati pehope.
Iyi nzira yekurapa zvinodhaka ine zvikomborero zvakasiyana pamusoro pekupinza mukati kana kupinza: 1. Kurapa zvinhu hazvigumburi gumbo remuviri uye hazvipindi mukati memuchiropa; 2. Kurapa zvinhu hazvipindi muropa rose uye hazvikwanisi kuonekwa kushandiswa kwemazuva ano. Izvi zvingave zvakakosha mumamiriro ezvinhu apo mishonga inorondedzerwa se doping uye ichiiona
muviri asingadiwi; 3. Zvinodhaka zvinosarudza kuunganidza muhupi hwehupi; 4. Kushandiswa kwemishonga kunoderedzwa nemakumi, uye kunyange mazana emamwe nguva.
Kana mukati mechipindiro chemukati chisingawaniki kupfuura 2% yehuwandu hwechirwere chinotorwa chinopinda muuropi, saka panguva ye electrophoresis chiyero chemishonga inopinda muhutano hwehuputi isarudzo yehukuru zvikuru; 5. Unhu hwekuita kwechirwere hauna kudarika biotransformation muchiropa zvinogona kuva nani kupfuura mushure mokunge mujoyi, uye kunyange zvakadaro mukati mechiratidzo.
Kuti uite chirongwa che electrosign, pasi-frequency impulse currents ye1-150 Hz, nguva 0.4-0.2 ms, voltage kusvika ku 50 V uye ukuru 4-8 mA inoshandiswa. Mukati physiotherapeutic maitiro, mashandisirwo anokosha anoshandiswa: "Electrosloon-1", "Electrosloon-2", "Electrosloon-3", "Electrosloon-TH". Electronarcon naLenar zvinoshandiswa kwe electroarcosis. Devices for elektronarkoz yakasiyana nemagetsi ekugadzirisa mune zvekuti vanoshandisa kuwanda kwemazuva ano. Mune dzimwe nyika (USA), zvigadzirwa zvevashandi zvegorosi hazvishandiswi zvachose nekuda kwekushanda kwavo.
Isa zvishandiso chete zve elektronarkoz. Kana panguva yekushandiswa kwe electrosine kurara zvishoma kana, kana zvakanakisisa, kurara kwepamusoro kunotanga, zvino panguva yekushandura kwe electron, murwere anobva apinda muhope huru.
Munyika yedu, muRussia, iyo Elektroson-ChT device ndiyo inonyanya kufarirwa, iyo inotitendera kuita sarudzo inonzi electrosounder panguva imwe chete yeVIHNUMX varwere.
Nekubatsira kwechigadzirwa ichi, munguva pfupi, boka rose remitambo rinogona kufamba nenzira ye electrosine.
Dzimwe nguva, kuitira kuti tibatsire kurara kwemasikati, chiedza chakavanzika kana kuti chinogadzirisa chinoshandiswa. Ichi bedzi chinofanira kuitika zvakanyatsonaka, kuti zvirege kukonzera kusvuta.
Pano, benzodiazepine runyararo ndeyekanakisisa, iyo isina chakanaka. Kutanga pane zvose, iyo nitrazepam (chiGermany zvakaenzana - Radeorm).
Iyi mishonga yakanaka nokuti haina kukonzera kukanganisa muhutano hwehope, haishanduki chiyero chezvikamu zvayo zvinokurumidza uye zvishoma. Sibazon inogona kuiswa munzvimbo yechipiri muhuwandu hwekuderera kwevanoshambadzira (iyo yeGermany yakaenzana ndeye Seduxen, iyo yePolish yakaenzana ndi Relan). Ipapo unogona kuisa benzodiazepine yakadaro.
zvinyorwa zvakadai sa alprazalam, phenazepam, nozepam (inofananidza nechiPoland tazepam), lorazepam, bromazepam, gidazepam, clobazam, nezvimwewo.
Diso dzinofanira kusarudzwa zvakanyatsonaka, zvinyorwa. Kana chiito chacho? mahwendefa, somuenzaniso, akakwana, saka haufaniri kutora tablet yose kamwe.
The antihypoxant "sodium oxybutyrate" mune zviduku zvishoma kusvika ku2 g, inogadzirisa, uye inokwana (4 g) kugadzirisa migumisiro. Sodium oxybutyrate iyo inyanzvi yakanaka uye inonyanya kukosha, inowedzera plasma HGH.
Amino acid makemikari "Phenibut" yakagadzirwa nekubatanidza phenyl radical kuL-aminobutyric acid. Phenibut maererano nehuwandu hunoreva "Nootropics", zvinoreva kuvandudza kufunga. Asi mumayero e2 kusvika ku4 g, ine nguva shomanana yekufungidzira. Phenibut akanaka nekuti inowedzera zvinyorwa zveDopamine muCSS, uye zvino inowedzera kudzidziswa uye mushure mekudzidzira kuwedzera mumwero we somatotropin mu plasma yeropa.
Zvose izvi zvinodhaka zvinogona kuvharirwa zvakananga muuropi, kwete chete nemubatsiro wezvigadzirwa zve electrosignic, asiwo nekubatsirwa kwezvigadzirwa zvema electrophoresis. Nzira iyi munyaya ino inonzi "transcerebral electrophoresis". Zvigadzirwa zvekugadzirwa kwe electrophoresis zvinoshandiswa mumuviri wemishonga inoshandiswa uchishandiswa panguva ino. Ikozvino yakananga inowanikwa kuburikidza nekugadzirisa zvinhu zvisiri izvo zvinobva kune rimwe guriti regetsi. Kune nzira mbiri huru dze transcerebral electrophoresis: transorbital uye intranasal. Paunenge uchishanda pamutambo we-transorbital, imwe electrode yakagadzirwa inowanikwa pamigwagwa uye imwe kune nzvimbo ye occipital, inotora vertebrae yakakwirira yemukati.
Paunenge uchishanda pamagetsi endonasal, imwe electrode yakagadzirwa inowanikwa mumhino dzomurwere, uye imwe inoshandiswa kumusana wemusoro, sezvinoitika kune transorbital electrophoresis. Kana panguva ye-transorbital electrophoresis, mushonga wemishonga unopindirwa muuropi kuburikidza nemakumbo emagetsi emagetsi, uye panguva yepranasal kuburikidza nemakumbo emagetsi emhino.
Iyo nzira yakapararira yepamusoro-soro. Kusvika iye zvino, nzira dzepamusana dzakagadzirwa nokuda kwekuiswa kwe-sodium oxybutyrate uye zvose zvinogadzirisa benzodiazepine kuburikidza nebitambo (kubva kune anode). Kunyange zvazvo kuiswa kwevhitamini B1 uye glutamic acid kunongogadzirwa chete nemagadzirirwo emagariro.
Nzira yacho inoshandiswa uchishandisa maitiro anowanzogadzirwa electrophoresis. Iko yakashandiswa ikozvino inowanikwa mA. Iko kushanda kwemazuva ano mune zvekugadzirwa kwemishonga inonzi electrophoresis inowanzobva kune 0.01-0.1 nA / m2.
Nguva yenguva yacho inotarisana kubva ku10 kusvika ku40 maminitsi. Kushumira sechinhu chinotarisana nemapurisa anogadziriswa iye zvino: AGN-1, AGN-2, AGN-32, inotakura AGP-33, AGVK-1. Mune majaira aya, dutu re sinusoidal mains ikozvino inoderera ku 60 V, mushure mokunge ikozvino yakagadziriswa uye yakarongedzwa. Ikozvino inodzorwa nemamirimita.
Vatambi vanobatanidza kushanda pamwe nekushanda dzimwe nguva havana mukana wekurara panguva yemasikati, asi vanogara pasi kuti vazorore.
Muchiitiko ichi, kune imwe chete nzira yekubuda nayo: kushandura usiku kurara nenzira yekuvandudza kudzorera kwayo, anabolic uye anti-catabolic effect. Pane imwe nzira yehutano inonzi "kufara kwehutano hwekurara". Inobva pakutora mapiritsi akarara maawa mashomanana asati avata. Kurara usiku, saka, kunowedzerwa nemaawa 2-3. Kuwanda kwekunyengedza, uye kunyanya, barbituric acid yakagadzirwa, ine kukwanisa kuwedzera kuchengetedza kwehomoni yekukura usiku.
Inonyanya kufanana nehuwandu hwemishonga barbiturate mutsara - Phenobarbital. Kare, aive akazivikanwa zvikuru pasi pezita rokuti "Luminal". Mukuwedzera kwazviri, zvigadzirwa zve barbiturate asidi zvinoshandiswa zvakare, zvakadai, semuenzaniso, Cyclobarbital, nezvimwe. Pane zvinhu zvinosiyanisa kubva pakurara mapiritsi emamwe mapoka. Bharbiturates, kunyanya, zvimwe zvinodzivisa basa reAdrenal cortex uye kusunungurwa kwehomoni dzemakemikari - glucocorticoids. Munyaya iyi, vanogona kuonekwa semishonga inorwisa anti-catabolic effects, kunyange mune iyi nyaya iyo inokosha.
Mahomoni eAdrenal cortex ishamwari inopesana nehomoni dzepabonde - androgens. Kushandiswa kwezvipembenene kunotungamirira kuwedzera kwey androgens nehutano hwepabonde. Dzimwe nguva migumisiro inosvika pakudaro zvokuti vanhu vanoshandisa barbiturates kwenguva yakareba kune dzimwe zvirwere zvisingaperi (epilepsie) inowedzera kupfuura vhudzi remuviri semonke.
Asi chinhu chinonyanya kukosha ndechokuti kuburikidza nekuderedza kushandiswa uye kusunungurwa kweglucocorticoids muropa, barbiturates "kushandura ropa" kushandiswa kweHGH nepituitary uye kubvisa bhero reHGH kuiswa kumativi ehutachiona (munyaya ino, chiropa, uko pane somatomedin yakabudiswa).
Kana tikashandisa bharururates kuti tiwedzere kurara kweusiku, kutarisira kwakanyanya kunofanira kutorwa. Bharbiturates vane simba rekuunganidza (cumulate) mumuviri. Saka, inogona kushandiswa kwemazuva anopfuura 10 mumutsara uye mune zvishoma zvishoma. Benzodiazepine zvinokonzerwa hachina chepfu, kana kuti kwete cheshuga zvachose. Kunyangwe zvinoratidzirwa sezvenyanzvi. Kunyaradza kwavo kune dzimwe nguva (zvichienderana nemutengo) zvakanyanya zvokuti zvinokonzera kurara. Izvo zvakanyatsokodzera kushandiswa sepiritsi yekurara. Sodium oxybutyrate uye phenibut vachiri kunyanya kufarirwa sezvavanenge vachigadzirisa uye zvishoma vanabolic effect. Phenibut inowedzera zvakanyanya kufambiswa kwe dopamine muCSS, uye dopamine, sezvatinoziva, inokurudzira yakanaka yeHGH secretion.
Pakati pezana remakore rechimakumi maviri. Kurapa kwezvirwere zvinotyisa, zvepfungwa uye zvinokonzerwa nehope nekurara kwenguva yakareba zvave zvichiitwa zvikuru munyika yose. Varwere vakarara mazuva 10 mumutsara, vachimuka chete nokuda kwekudya, vachishandisa chimbuzi uye kutora mapiritsi matsva ekurara. Akaita kurapwa kwakadaro bedzi mumagariro. Kusvikira ikozvino, munyika yedu, kune mamwe makiriniki, kurara kwezuva kwe5 kunoshandiswa kupedza kupera kwehutano hwemagetsi.
Zvakakosha kuti kurara kwenguva yakareba kunoratidzira kushanda zvakanaka muchechi yegastric uye duodenal ulcer, uye chaizvoizvo mushonga unopisa zvikuru wepectic ulcer is somatotropin.
Mune mishonga inobatsira yemitambo, kurara kwenguva yakareba hazvibviri kushandiswa, asi ini kazhinji ndaifanira kushandisa mazuva 2 ekurara kuti ndirape overtraining uye kukunda "kupera" mukukura kwevatambi. Kurota kwakadaro kunoitwa pavhiki. Mamwe manheru, mutambi anoenda kunorara sezvaanoita. Mangwanani mushure mokunge amuka anotora mapiritsi okurara, ane kudya kwekudya uye anovatazve hope kusvikira manheru. Manheru manheru anomuka, anotora mapiritsi, kurara uye anoenda kunorara zvakare kusvikira mangwanani. Kana munhu akarara musi weChishanu manheru, anorara yose Mugovera neSvondo (pamwe nekuzorora kwekudya uye chirongwa chitsva chemishonga inorara) uye anomuka chete musi weMuvhuro mangwanani, ipapo nguva yehope dzakadaro ndeyezuva re2.5.
Nokuda kwekurota kwakadaro, zvose zviri pamusoro apa zvakagadzirirwa zvakakodzera, uye zviri nani kuti uzvishandure kuitira kuti urege kudzivirira uye kupindwa muropa. Benzodiazepine zvigadziriswa kana kusanganiswa kwavo ne sodium hydroxybutyrate ndiyo inonyanya kuda. Panyaya yekubatana kwakadaro, zvose benzodiazepines uye hydroxybutyrate zvinotorwa mumwero.
Zvokudya zvakatorwa panguva iyi yezuva 2.5 kurara kunofanira kunge yakagadzirwa nema amino acids, mapuroteni nemaproteine ​​oga. Saka isu tichawana zvakakwana kusunungurwa kwe somatotropin uye kuwedzerwa kwemasimba mashoma kuchabatanidzwa nekuderera kwemafuta mashomanana.
Pasinei nenyaya inogona kushandisa mishonga inorwisa antiyychitic yakadai seaminazin, etc. inoshandiswa nechinangwa chekutengesa kana chinangwa. Makore akawanda apfuura, antipsychotics dzakasikwa kuti dzibatwe nevanorwara mupfungwa. Vane simba rakadaro rakasimba zvokuti munhuwo zvake, kutora imwe antipsychotic, inowira muhope huru. Iko kurara kunogona kugara kwemazuva mashoma, sezvo mamwe antipsychotics angakonzera kurara kunyange zvakadzika kudarika kupora kwakanyanya mapiritsi.
Neuroleptics, zvisinei, ine uwandu hwemamwe matambudziko asina kunaka. Mhando "yakaipa" inonyanya kushandiswa neuroleptics inopera muhutachiona mumasero emagetsi eL-DOPA, dopamine, norepinephrine uye kunyange kuparadzwa kwemasero emagunha anogadzira aya maurotransmitter. Kurara pasi pechiito chevangarava haisi kungoita kuti kuwedzererwa kwema somatotropin, asi kunopesana, kunodzikisa kusunungurwa kwemaviri somatotropin uye hormone dzepabonde. Anabolic zvirongwa mumisungo yemisumbu inononoka zvikuru.
Asi huwandu hwehutu hunoramba huchikura. Vanazhinji vanachiremba vanoziva vanorayira varwere vavo vane mishonga yemishonga yakadai semishonga iyo inoparadza hutachiona hwehutano mumutauro wakanyanya. Nokudaro, ingadai iri chikanganiso chisingakanganwiki kuti usatarise nyaya iyi. Hypnotic hypnotic conflict and this should always be remembered.
Kurara kwekurara kunogona kuitwa pasina mishonga zvachose, sezvo uine ruzivo rwekudzidzira hutano hwekutanga. Pane nzira dzakawanda uye nzira dzekuzorora.
Ngatiedzei kugara pamusoro pezvakanyanya kufanana navo, izvo zvinonzi classic autogenic kudzidziswa na Schulz. Sezvo uine ruzivo rwehutano hwakadaro, munhu anogona kuzvichenesa mumamiriro ekudzikama zvakadzika kana kurara. Kunyange kana munhu asingakwanisi kurara, uye ari kungoita zororo rakadzika, izvi zvinotarisa zvinoita basa rehupi hweuropi uye rinowedzera kuchengetedza kwekukura kwehomoni.
Kuti uwane rusununguko rwakakwana, iwe unofanirwa kurara pamusana wako uye kushandisa nzira yakagadzirirwa yehutano: 1. Svinura meso ako zvakasimba (zvakanakisisa kuenda kuimba yakasviba umo rima rose rinotonga); 2. Fungidzira manzwiro ekurwadziwa: 1) mumaoko; 2) mumakwikwi uye mberi; 3) mumaoko kubva pane zvigunwe zveminwe kumapfudzi; 4) mumakumbo, kutangira kubva kune zvingano zveminwe uye kupedzisa nemisungo yehudyu; 5) kukuremwa mumisungo yakakosha; 6) kukuremwa mumashure; 7) kukuremwa mumatumbo emimba uye lateral musikana mimba; 8) kukuremwa mumatumbo emvere; 9) kukuremwa mumisungo yefudzi; 9) kukuremwa mumisungo yemutsipa; 10) kukuremwa mumatumbu ose e musoro.
Iyo yekupedzisira ndiyo basa rinokosha kupfuura dzose, sekuzorora kwemaitiro, masticatory nematauriro emashoko zvinokonzera kusununguka kukuru uye kunzwa kworugare. Zvimwe, manzwiro ekurwadziwa anokonzerwa: a) mumasanganisi emasticatory; b) mumisungo yekutaura (mitsipa yerurimi nemarara); c) mukufananidza misungo (misungo yemiromo, maziso, nheyo, pamberi). Zvadaro, mushure mekukwanisa kufungidzira kusuruvara mumatumbo ose, kunouya kunzwa kwokuzorora zvakakwana uye kunyorova kuneta.
Chetatu chimiro chetsika ndeyekunzwa kunzwa kwekupisa mumasumbu ose. Chimiririro chekupisa chinoshandiswa muhutano hwakafanana sechimiro chekukura.
Kana iyo inowanzo, mufananidzo wokufananidzira wekupisa uye kusimba isingashandisi, zvinokosha kushandisa mienzaniso yekuzvipa mazano sekuti: "Maoko anorema uye anopisa," nezvimwewo Aya mafanomu anofanira kuziviswa. Kana kududzira kwemazwi kusingabatsiri, unogona kukumbira rubatsiro kubva kune unyanzvi hwepfungwa, wakamboongorora kuti ane diploma. Nyanzvi yezvepfungwa inotora chikamu ichocho chekuedza kwaunoda kuti uratidze kuti uri kuita zvekufungisisa nekuzorora. Nokudaro, kushanda pasi pekutungamirirwa kweyanzvi kwakajeka uye kunonyoresa kupfuura kuzvimirira.
Sezvaunokudziridza unyanzvi hwekuzorora nemumwe nyanzvi, unogona kuenda kubasa rakazvimirira. Kune vamwe vatambi, unyanzvi hwekuzorora hwakagadzirirwa kusvika pakudaro zvokuti vanogona kuzvipinza muhope huru mukati memaminitsi mashoma. Uyezve, nguva yekumuka yakatemwa uye munhu anomuka seawa reawa.
Dzimwe nguva, nokuda kwekukurumidza kukudziridza hutano hwekuzvipa-mazano nekuzorora, mazano ekuzvipira-mavara akanyorwa pane imwe kaseti yemakaseti inopikisana nechemberi yemimhanzi uye zvinonzwika - mheremhere yemvura, kugunun'una kwemvura , shiri dzinokambaira, nezvimwewo.
Kune chechi duku chevanhu vasingakwanisi kuporesa kunyange nekubatsirwa kwechirwere chepfungwa. Uye pano tinouya kubatsiro ekubatanidza nzira dze psychotherapy. Kazhinji kacho kazhinji kacho anoshandisa zvinodhaka.
Kana iwe usingagoni kukwanisa kusununguka uchishandisa kuzvidzora, iwe unogona kutora chiduku chiduku chekuzorora kana kuti kugadzirisa zvinodhaka (zvakanyanya kuti izvo pachazvo zvinenge zvisinganzwisisiki, huwandu hwekunzwa hunozorora huri nyore) uye hunopesana neizvi mamiriro ekushandisa anoshandisa zvose izvozvi-self-hypnosis techniques dzisina kupa chigumisiro chakachena. Nekubatanidzwa uku, mhedzisiro inogona kuwanikwa munenge 100% yematambudziko.
Imwe yakabatanidzwa nzira ye psychotherapy ndiyo electro-psychotherapy, apo maitiro ezvokuzvidzivirira anoshandiswa kupikisana nechekuita kwesimba reElectrosleep apparatus. Nzira yakaoma zvikuru ndeye electro-narco-psychotherapy. Panguva imwecheteyo, mazano kana kuzvidzora kunoitwa kunze kwemashure ekuiswa kwemishonga yemishonga pamwe nekubatsirwa nemagetsi emagetsi, kana nekubatsira kwe transcerebral electrophoresis maererano netsika ye transorbital.
Mishonga yakadaro seyerodium hydroxybutyrate uye phenibut inonyanya kukodzera kwema-electro-drug therapy. Izvo zvakanaka nokuti pamwe nekugadzirisa uye kusvibiswa kwemaviri, pamwe nekuwedzera kusunungurwa kweextotropin muropa zvakananga panguva yekuita kwayo pachavo, vanoitawo kuti kuwedzere kukuru kwemainototropic hormone mumasero eosinophilic pituitary uye dopamine mu uropi hunogadzirisa zvivako zvinodzora kusunungurwa kwehomatotropic hormone muropa panguva uye pashure pekuvhima.
Sezvo HGH inowedzera shuga yeropa uye mafuta acids, zvakasununguka, kuderera muropa ravo kunomutsa kusunungurwa kweHGH. Nokudaro, huwandu hwepamusoro hweSV muropa hunoonekwa munguva yekutsanya, kana zvokudya zvisingapindi mumuviri zvachose. Kuwedzerwa kwehuga yeropa uye mafuta acid, zvinopesana, zvinodzivirira kusunungurwa kwehomatotropic hormone. Kuvhiringidzika kwekusunungurwa kwema somatotropin muropa mushure mekuvhara ropa kweglucose kunoratidza izvi zvakajeka.
Iko kukurudzirwa ndeye 6 kakawanda pazuva, uye kunyanya kakawanda haisi chinangwa chekuwedzera kudya kwezuva nezuva nemashoko akawanda.
Icho chinangwa chekuderedza huwandu hwehuga uye FFA muropa mushure mekudya kumwe chete. Nokudaro, "chikafu chekudya" cheHGH secretion hachina kugadziriswa.
Pausiku, zvinokurudzirwa kana kuti kudya mapuroteni asina kudya asina mafuta uye mahydrohydrates, kana kutora musanganiswa we crystalline amino acids, kuitira kuti usapindira neusiku secretion yekukura kwehomoni. Zvakakodzera, kudya kwekupedzisira hakufaniri kunge kwakasara kupfuura 6 masikati, uye usati waenda kunhovo unogona kutora chete purestalline amino acids uye hapana chimwezve.
Zvizhinji zveproteiniti zvine chikafu chemafuta nemahydrohydrates. Pano tinouya kuzobatsirwa nevakakurumbira vembe vatsvene (pasina mavara), izvo zvinenge zvakakwana mapuroteni ezvokudya. Zvinotapudzwa nyore nyore, nokuti hadzina shanduro yemagetsi (Ndinokuyeuchidza kuti yaii rimwe jeri guru).
Kusarudzwa kwemajini kubva mukudya kunokosha kwete nokuti vane zvakawanda zvekushaira. Lecithin majeka ane zvakawanda, uye maererano nekutama kwe-atherosclerosis haisi ngozi. Nzira isina kunaka ndeyekuvapo kwemazamu ehuwandu hwemafuta acids, izvo zvinodzivisa kuchengetedzwa kweHGH. Ndicho chikonzero nei vachifanira kuiswa kunze kwekudya.
Sezvo zvisingaiti sezvinoonekwa pakutanga, zviduku zviduku zvehydrohydrates zvakatorwa panguva yekudzidzira (zviduku zvishoma) zvinongononoka, asi zvinokonzera kuvhara kweHGH kwakasimba. Nokudaro, mazano ekutora chiduku chiduku checarbohydrate carbohydrate pakarepo vasati vashanda, pamwe chete nemaminitsi ose e15 ekurovedza muviri, zvinonzwisisika. Izvi zvinogona kuva glucose, fructose, maltose kana sucrose. Pari zvino, zvinwiwa zvakanwiwa zvinowanikwa zvinowanikwa zviri nyore kudya makhahydrates muvhenganiswa nemavitamini uye microelements. Iyo inoputirwa mumvura uye inotorwa mudiki maduku maduku asati asvika uye panguva yekurovedza.
Zvinyorwa zvinokonzerwa nemahydrohydrates muzvokudya zuva rose zvinotungamirira kukuderera kukuru mukuvhara kwe somatotropin. Nokudaro, mahydrohydrates, zvose zviri nyore uye akaoma, anofanira kungoshandiswa chete sezvinodiwa, kudzivisa masukisi uye confectionery.
4. Kutonhora kunokonzera vanabolism. Kuramba pamatambo ekupisa kunowedzera zvakakosha zve somatotropin muropa. Semuenzaniso, munguva yekugara mu sauna, huwandu hweHGH muropa hunowedzera ne 2-3 nguva, iwe unongoda kushandisa zvakakodzera kutengesa kwekushisa. Mu sauna, unofanirwa kupisa zuva nezuva, zvishoma nezvishoma - kubva ku5 kusvika ku15 maminitsi. Kana zvisina kudaro, kuchinja kukuru mumetabolism hakuzoitiki. Izvo zvishoma zvishoma zvekushanyira sauna, iyo inopa anabolic effect - nguva 3 pavhiki. Imwe yevhiki nevhiki, kugara kwenguva refu mu sauna inowanzoshanyira maererano nehutano hwehutano hahuzivi. Mvura yekuRussia yakashambadza muitiro yakaratidza kunyange hukuru hwakanyanya kupfuura sauna. Kunyange muFinland, uko kushanyira sauna kunovakirwa muchitendero, Finns inoramba saunas uye inovaka mabhati ekuRussia.
Kushandiswa kwakakodzera kwemazinga ekushisa akakwirira kunotungamirira kuwedzera vanabolic zvirongwa pamwe chete "kupisa" kwemukati mafuta. Ichi chiratidzo chakanaka chekudzivirirwa kweHGH. Kana muviri uchinetseka, chiitiko chinonakidza chinoitika, icho chinonzi "centralization yeropa rega".
Pamusana pekuwedzera-kukurudzira kwekunzwira tsitsi-adrenaline system uye kusunungurwa muropa rewandu hwakawanda hweAdrenaline, kusungirika kwakasimba kwemidziyo yese yepasi uye kuwedzera kwepakati kunowanikwa. Kupera kwemidziyo iri mumativi ose kunoderedza kutengesa kwehutano hweganda uye kunodzivirira kupisa kwakanyanya kutapinda kupinda nhengo dzepamusoro. Kuwedzera kwekuvhenekera kwemafuta emutsvina kunokonzerwa nekusimba kwakasimba kwete kwete chete ganda, asiwo nemidziyo midzi, iyo inokanganisa kupararira kweropa mumafuta mashomanana.
Neurotransmitters inokonzera kupindira kweropa rekupararira uyewo inducers ye somatotropin yakabudiswa. Mubhagi yekushambisa kana sauna, apo kutengesa kwema air ari 110 digiri Celsius, uwandu hwe somatotropin muropa hunogona kuwedzera 6 (!) Times. Ngatisarege kukanganwa kuti somatotropin inokonzera kushungurudzika uye kusunungurwa kwayo kunokonzerwa nemhando ipi zvayo yekushungurudzika kukuru. Somatotropin inobatanidza mafuta akawanda kubva mumuviri unoisa pasi kusvika muropa uye unotendeuka mitochondria kubva kumahydrohydrate kusvika kumafuta ane mafuta kuti awedzere kubudirira kwawo.
Mushure mezvose, mitochondria mumashanduko ekushanduka-shanduka ndiyo inonyanya kushandiswa masero uye inotambura zvikuru. Inovadzivirira kubva pakuparadzwa kwema somatotropin. Kana adrenaline uye glucocorticoid hormone muhuwandu hwakawanda panguva yakaoma mupfungwa inogona kukuvadza zvivako zvemasero, ipapo somatotropin - haamboiti.
Pane zvinopesana, zvinodzivirira kusanganiswa kwemuviri kwemuviri kunogona kuitika nekuda kwekuwedzera kweAdrenaline uye glucocorticoids.
Chimwe chiitiko chakanaka chesauna ndechekuderera zvishoma nezvishoma mumusasa wemasabolism, iyo inopedzisira ichikwira mitambo mumatumbu, asi masumbu anozivikanwa kuti anokura ne 60% nemhaka yekudzivirira katabolism, uye chete 40% nekuda kwekuwedzera kwevanabolism.
Izvo zvinogona kutaurwa nezvounhu hwakadai sekutsungirira uye kukwanisa kupora mushure mokutambudzika kwakasimba. Kukura kwekutsungirira, pamwe. uye simba, kazhinji 70% inofanirwa nekudzikisa pasi catabolism Kuwedzerwa kutsungirira kunokubvumira kushandisa mashomanana ekudzidzira uye, pakupedzisira, kusimbisa anabolism nenzira isina kunaka. Nheyo yekona ndeyekuwedzera kuvhara kweHGH.
Kunze kwekudzikira kwakadzika kunogonawo kuwedzera anabolism nekuwedzera kuchengetedzwa kweHGH. Izvi zvinoitika sei? Kana muviri uchidzima, zvinodzivirirwa zvinowanikwa - kuwedzera kwakanyanya kwepolly lipolysis. Kuwedzera kwezinga reFFA muropa kunowedzera kutonhora kwemuviri nekuda kwekuparadzaniswa kwehushijiti uye phosphorus (thermogenic effect).
Munguva yemberi inouya "go-mberi". Mushure mekupera kwekudziya kwechando, huwandu hweFFA muropa hunoderera uye, maererano naizvozvo, huwandu hwaHGH hunowedzera. Izvo zvinokanganisa chete ndiko kuwedzera kwemafuta mashomanana, sezvakaita nyaya yekushandisa nicotinic acid. Kuwedzerwa kwemukati mavara mafuta kunogadziriswa nekudya uye kunotevera "kuoma".
Cold exposure inofanira kuitwa zuva rega roga, uye fomu yakanakisisa inokurudzira nemvura inotonhora. Kudururira kunowanzoitwa mu "nzira" yakatorwa. Pakutanga vanoderedza maoko avo. Mushure mekugadziriswa, izvo zvingatora nguva dzakasiyana kumunhu mumwe nomumwe, zvichienderana nehutano hwehutano nehutano hwehutano, mamakumbo anodururirwa, uye pakupedzisira muviri wose.
Nhanho yekugadziriswa kwechigadziro ichi chinenge chiri chega. Kudururira mvura inotonhora kunobatsira pane mamwe maitiro ekuoma. Kukurukura nemvura inotonhorera kune nguva pfupi, uye muviri hauna nguva yekudarika, kusiyana nemhando dzakadaro dzekuoma semvura inotonhora uye yekugeza mumvura inotonhora. Hypothermia haina kuitika, zvisinei, kupindura kwe-neuro-reflex kuitika kwemuviri kune nguva yekukura, uye kusunungurwa kwemaatotropin kunosvika pakuonekwa kwezvinhu zvinooneka (dzimwe nguva 3-4 nguva).
Iyi kusunungurwa ndeyenguva pfupi, zvisinei, iyo anabolic effect inonyatsooneka. Cold kuoma kuitira kuti kuve musimba mashoma kwakashandiswa zvikuru mukurovedzwa kwevatambi vezera rose nemarudzi (kunze kweivo, chokwadi, uyo asina kushambidza zvachose).
Mvura inotonhorera inogona kudururirwa kune vanhu vane zvirwere zvisingaperi zvinoputira. Ingoita izvo zvakarurama, ndinosimbisazve, kunyatsocherechedza, mumatanho. Chii chinonzi showerwise shower? Mutsara wekutanga, unodurura maoko ako pamusoro pekona. Bhuku rinowanzogadzirwa nemvura inotonhorera inotonhorera zvakanakisisa nokuda kwechinangwa ichi.
Hapana anoziva kare kuti iwe unotsvaga sei, kunyatsogadziriswa pakudururira zvikwata kuchauya. Kana uchinge uchinzwa kuti kuchinja kwakakwana kwakasvika, unogona kutanga kudurura maoko ako kose. Chikamu chinotevera ndechekudururira tsoka pamwechete nemaoko. Kune vanhu vazhinji, netsoka ndiyo "isina simba" nzvimbo maererano nekurwisana nechitonho uye kushandiswa kwayo kune mvura inotonhorera kunotora kunotora nguva yakareba kwenguva refu.
Mushure mekugadziriswa kwetsoka, makumbo atoita mabvi-akadzika. Uye chete ipapo, sezvavanochinja, makumbo anodururirwa kwose kwose. Icho chiri padanho rekupedzisira, apo maoko nemakumbo zvichange zvakajairika kudonha nemvura inotonhora, unogona kuenda kunomutsa muviri wose.
Kuti uzvidzivirire kubva kunotonhora kana kuwedzera kwechirwere chipi zvacho chiripo, chisingarapiki chinoputika, unogona kutanga kutora ascorbic acid megadoses (10 g / zuva ye70 kg yehutemi hwemuviri) pane inotevera, yakawanda "inotyisa" yakaoma, kana kupedza vaviri yemazuva e "akaoma" kutsanya pasina kudya uye pasina mvura. Vazhinji vachiri kuda kukwira.
Zvinonakidza kuti munguva yekudziya, uyewo munguva yekupisa, zvinotaurwa kuti centralization yeropa rinowanika. Zvidzitiro zveganda, zviduku zvine mafuta uye matumbo zvakaderera. Asi midziyo yeuropi, mwoyo, itsvo dzinowedzera. Ropa pamwe chete nekupisa kunobva kumativi ose kusvika pakati. Mutumbi unotsvaka kuchengetedza hupenyu hwehutumbi huri pakati pechipfuva chemhirizhonga. Kune rumwe rutivi, kuomesera kwakasimba kwemidziyo yepachiviri chetachiona kunoderedza kupisa kwehutano hunoita uye kunodzivirira kupindira kwechando mumuviri, pamwe nekurasikirwa kwehuni nemuviri.
5. Yakagadzirisa zvinorwadza. Tatove tataura kuti zvakakura sei b-endorphin ine HGH secretion. Hapana mumwe mumiriri wemapurisa anogona kuwedzera kuchengetedzwa kweHGH 30 nguva, chero ipi zvayo inoshandiswa. Sezvo ichi chirwere ichi hachiwaniki pamusika wedu, nzira chete yekushandisa nayo ndeyokukurudzira muviri wega b-endorphin.
Parizvino, mhando dzakawanda dze endorphins dzave dzisiri kure uye dzakagadzirwa - a, b, y-endorphins, dinorphin, b-neo-endorphin, a-neo-endorphin. Fragments ye endorphins - enkephalins, iyo ine morphine-yakafanana-effect - enkephalin, leucine-enkephalin, methionine-enkephalin, yakawanikwawo. Zvose endorphins uye enkephalins zvinokwanisa kuita muuropi zvakagadziriswa (uye zvisizvo zvisiri zveperesi) zvinonzwisisa morphine.
Asi zvakasiyana ne morphine, sezvataurwa pamusoro apa, hazvina matambudziko anokonzera uye hazvisi kukonzera kusvuta.
Zvinokosha kuziva kuti endorphins uye enkephalins zvinoumbwa kwete chete munharaunda yepamusoro yenherera, asiwo mumutsara wepamuviri, uye maitiro avo anowanzoenderana nezvinowedzera kudya.
Nzira huru dzekutengesa marwadzo anoonekwa, anozivikanwa nhasi, ndeaya:
a) Multi-needle bed. Inogadzirwa, kazhinji, kubva kune yakavhara redhiyo inoshandiswa yakaiswa mune rubber mat. Inogona kuitwa kubva kuZvnetsov applicators. Nenzira, vashandi vanogona kungoshandiswa kumutumbi uye vakamanikidzwa nemutoro muduku, zvishoma nezvishoma kuwedzera hukuru hwemutoro.
Kuwedzera kuwedzera mumutoro kunobudiswa nokuti nekubudiswa kwe endorphins, kunzwa kwekunzwa kunorwa kunowedzera nekuwedzera. Nekugara kwenguva yakareba, nguva inogona kuuya apo munhu anorega kurwadziwa zvachose.
b) Izvo zvinokonzerwa nemagetsi emhepo. Kupisa kubuda pamusoro pemuviri kunoshandiswa, kazhinji, nemichina ye D'D'Arsonval. Simba re spark discharge rinogadziriswa. Kana yakamboshandiswa neArim Arsonval zvombo zvakange zvakakodzera kurasikirwa nenguva yekuenda ku polyclinic, ikozvino zvose zvashanduka kuti zviri nani. Zvinenge zvese zvishandiso zvekurapa zvinotengesa zvigadzirwa zviduku zvinotakura zvakakodzera kushandiswa kwemusha.
Iyo kitambo ine chigadzirwa ichi chinosanganisira seti yebubu yekutengesa zvisikwa zvakasiyana zvemuviri uye mukati mumiko. Pane zvakawanda zvinoshandiswa zvinoshandiswa pamagetsi. Vanopa spark yakasununguka hapana yakanyanya kupfuura yaAlsonval apparatus. Pano pano havane zvidimbu zvakasiyana-siyana izvo zvinonzi App Arsonval zvine.
c) Kugadziriswa. Chimiro chechigadzirwa chemaitiro chinoshandiswa nenyanzvi pane dzimwe nhengo dzehupenyu dzakashanda. Kune, zvisinei, zvigadziriswa zvisiri nyore nenzira yekushandura dzimwe nzvimbo dzomuviri dzine nyundo yakawanda-nenyuchi. Iyi nzira inogona kuitwa kunyange neusingazivi. Iko kunewo tsanangudzo yakasiyana-siyana inosungirirwa iyo "roll" pane dzimwe nhengo dzomuviri. Kune nzvimbo dzakasiyana dzomuviri, kushandiswa kwaro ne nyundo yakawanda-nenyuchi kana kushandiswa kwekushandisa kwe Kuznetsov kunokonzera kusunungurwa kukuru kwe endorphins.
Chikamu chakadai chemuviri chikamu chemutsipa. Mutsipa wemutsipa, mutsara wetrapezius - izvi ndizvo zvinowanikwa mumutsipa. Apo mumwe munhu ane ruzivo rwekudzidzira mafungiro anoshandisa ikora rine nyuchi-nyuchi ine nyundo, kusunungurwa kwe endorphins kwakakura kwazvo zvokuti zvose zvinonzwa zvinowanikwa nemunhu zvakafanana nezvomunhu akapiwa morphine. Chokutanga kunouya kuzorora. Kana pane imwe nzvimbo kwakanga kusina kurwadziwa kwakanyanya, zvino inowedzera pakutanga, uye zvino inonyangarika zvachose.
Manzwiro acho anowedzera zvishoma, ndinoda kuseka pasina chikonzero zvachose. Mushure mokuguma kwechikamu chinouya kurota. Zvinenge zvose, uye shure kwekuiswa kwe morphine.
d) kurwadziwa kupisa. Uyu huyu hunokosha hunotarisirwa kuita kuti murwere aenzanise marwadzo.
Iyo inowanzoitwa massage yakawanda inobatanidzwawo nekubudiswa kweendorphins muropa, kunyanya kana iri pamwe nekunyatsodzidza kwemutsipa. Iyo kurwadziwa kunogona kuva nehutachiona hwemuviri uye kunzwa sechinhu chinowanzosimbirirwa. Imwe mushure mokunge ichipfuura ichi chikumbaridzo, marwadzo anonzwika akadaro. Kunyoresa kwakadzika kwakakonzera kunetseka kunorwadza, izvo zvinonzwisiswa sechidimbu, asi zvinoguma mukubudiswa kweendorphins muropa. Sekubudiswa kwe endorphins, chirwere chinorwadza chichawedzera nekuwedzera, saka simba rekuisa masasa rinogona kuwedzera zvishoma nezvishoma, asi munhu haazonzwi kurwadziwa.
Pakupedzisira, zvichiita kuti murwere anoremekedze huwandu hunounza hukukuvadza, asi zvakakosha zvekusikwa kwakadaro zvichave zvakakosha.
e) Zvinoshungurudza zvemiti yemakemikari anoshandiswa. Inogadzirwa nenzira yekuputika kwemuviri nemukomana wemucheka. Pakuvamba kuputika kwakadaro kunoitwa zvakanyanya simba, pamucheto wekubata.
Zvadaro, zvishoma nezvishoma, sezvo endorphins inosunungurwa muropa, kuwedzera kwekuwedzera kunowedzera, nokuti kurwadziwa kunzwisisika kwava kuderera nekuda kwekusunungurwa kwe endorphins. Pakupedzisira, rukanda rwemunhu runogona kurohwa netsiva rose. Iye acharamba asina kunzwa kurwadziwa.
e) Kutarisa maitiro. Kudzidzira kunoitwa nenzira yakadai yekukonzera marwadzo anononoka muzvikamu.
Dambudziko rekudzidzira hakusi kutambanudza nzvimbo dzakawanda dzakambokuvara. Panofanira kuva pasina maitiro anoomesa menisci emabvi. Kurwadziwa pamwe chete kunofanira kugara kuchienzanisa uye kunofanirwa kukonzerwa kwete kunyanya nekudzvinyirira sekutambanudza.
g) kurova rufuro mubhati. Kuti uite marwadzo anononoka, kwete chete birch whisks anoshandiswa, asiwo softwood whisks - pine, spruce.
Pasinei nekuti kusunungurwa kwakanyanya kwe endorphins kunoonekwa painoiswa pamutsipa - nzvimbo ye trapezium, delta uye kumashure komutsipa, yakanyatsokodzera inosvika pamusana wose, nokuti paakaiswa kune musana uye paravertebral, nzvimbo yakakura ye norepinephrine inosunungurwa muropa, iyo, sezvatinoziva, inosimudzira a-adrenoreceptors uye inowedzera kuchengetedza kwekuwedzera kwehomoni.
6. Dosed oksijeni nzara. Kupera kunononoka kwomuviri weakisijeni mumhepo yakanyanyisa kunokonzera kuwedzera kuonekwa mune zvinyorwa zve somatotropin muropa. Ichi ndicho chikonzero chekudzidzisa kwemakomo-mamiriro ekumhanya kwevatambi, apo kudzidziswa kunoitwa mumamiriro ezvinhu epasi makomo nemapakati mapakati. Kuwanda kwezvikomo zvekutambira kunotaura pachako. Zvakanakira kuenzanisa kukwana kwe okisijeni zvinonyatsozivikanwa.
Zvinogona, zvisinei, kuenzanisa mamiriro ezvinhu egomo remamiriro okunze pabani. Izvi zvinoitwa nenzira dzakasiyana-siyana:
a) Kuita zvinangwa pakubata kufema. Kune zvakawanda zvakadai zvekudzidzira, uye vanobvumira, kunze kwechiedza chekuita oxygen, nenzara, kuti ibudirire zvimwe kuunganidza carbon dioxide mumatumbu, ane mamwe maitiro anobatsira. Muchirevo ichi, kudzidzira kubata kufema, kwakaitwa pabani, kune zvakanakisa pamusoro pekugara kwechikomo-mhepo yekudzidzira. Mumakomo, nekuda kwemafirimu asinganzwisisiki, kubhadharwa
kuwedzera mukudzika kwekupemha uye kurasikirwa (leaching) kabhoni dioxide kubva mumuviri. Bitter dyspnea, zvisingazivikanwi sezvazvinogona kuonekwa pakutanga, zvinokonzerwa kwete nekushaya kwe okisijeni mumuviri, asi nekushayikwa kwekakisi dioxide.
b) Zvishandiso zvakakosha zvinogadzirisa rwendo rwechifuva - corsets elastic, mabhanhire, nezvimwewo.
c) Kuremekedzwa nemafuta emagetsi nemhepo yakadzika inogadzirwa kuburikidza nemichina yakagadzirwa. Semitemo, izvi zviyero zveanesthesia umo mweya unowanzosanganiswa nemhepo ineripi - nitrogen. Dzimwe nguva kabhoni dioxide inowedzerwa kune ichi chisanganiswa muhuwandu hwepasina huwandu hwe8% yekusanganiswa kwekusanganiswa.
d) Kuputira kuburikidza nevanonyengedza vanyengeri. Idzi ndidzo zvishandiso zvinoshandiswa zvekushandisa pamba. Kupera kwemhepo ine oksijeni kunowanikwa nenzira dzakasiyana.
Vamwe vavo vanoshanda pamutemo wekudzoka kufema -kunyaradza uye kubudisa simba kunoitwa munzvimbo yakavharwa. Vamwe vanoshanda padzidziso yekusika imwe "nzvimbo yakafa" - inhale uye exhale inogadzirwa muhuputi hweumwe hupamhi uye hurefu, hwakapetwa nekapi (kuitira kuti inotora nzvimbo shoma). Kune dzimwe mhando.
Dzimwe nguva vanyengeri vanobatanidza mumuviri (kazhinji kazhinji, pane bhanhire kana kumashure), uye kudzidziswa kunoitwa kunopesana nemamiriro ekufema kuburikidza ne hypoxicator. Kazhinji kazhinji, nemumwe munhu anonyengedza anofambisa pane zvinyorwa zvinowanikwa. Pashoma kakawanda - nehandare.
e) Kuiswa mune mumwe munhu thermocamera uye thermocabine. Muvharo rega rega rakavharwa kana kambani yakamanikidzika, munhu anonyorera uye anoporesa munzvimbo imwechete kusvikira mweya we okisijeni inoderera kusvika pane imwe nzvimbo uye carbon dioxide inowedzera. Kune zviitiko zvekuvakwa kwematambo ose, apo humwe hurumende yehukemujini yakange yakachengetedzwa zvakanaka (kugadzika kwegomo kana pakati pegomo mode).
7. Aerobic exercise. Kubatsirwa nemigumisiro yekuita maitiro aerobic zvinorondedzerwa mune zvakakwana mumabhuku akasiyana-siyana emabhuku. Ndichingowedzera chete kuti kusunungurwa kukuru kweHGH muropa kunochengetwa munguva yeprint. Izvo zvinokonzera kusunungurwa kwakanyanya kwema catecholamines muropa, uyewo endorphins. Maererano nekucherechedza kwandinoita, kutarisa kunowedzera kuwedzera mafungiro kupfuura kunonoka kwenguva refu paunofambidzana. Kunakidzwa kwe-adrenoreceptors munguva yeprint ndeyekukura, saka ndiyo sprint inoshandiswa kudzidzisa vatambi mumitambo iyo inoda kuvaka masimba akawanda. Kana iwe uchida kuunganidza chimwe chiitiko chebasa rakakwana, zvino izvi zvinoitwa nokuwedzera muwandu wekuita basa rekudzidzira.
Kushandisa HGH mukuvaka muviri uye kuwedzera kukwirira kwevanhu
Sezvambotaurwa pamusoro apa, kushandiswa kwe somatotropin kuri kuwedzera pasi rese. Uye havashandisi zvakanyanya kurapwa kwevamwe nevatambi, asi mukurapa kwebumbiro remitemo shoma shoma. Vakadzi vane ruzivo muhupenyu hwehupenyu vanoti murume wese anofanira kunge ane zvinhu zviviri zvakakosha: kukura uye mubhadharo. Kukura, kufunga iwe, kunoiswa panzvimbo yekutanga. Mukusekwa kose kune chikamu chejokes. Zvimwe zvose ndezvechokwadi.
Vabereki vechidiki vaduku vanoda kuti vana vavo vave vakwegura kudarika ivo, nokuti kukura kuduku kunowanzokonzera matambudziko mazhinji kune munhu, izvo zvisingatombofaniri kuverengwa. Kune rumwe rutivi, vabereki vekukura kwakanaka vanoda vana vavo kuti vave nekukura pamusoro pevhareji kuitira kuti vawane zvimwe zvikamu zvemitambo. Izvi zvinoshanda kumitambo yakawanda, incl. uye kutamba. Nezve basketball uye volleyball, haukwanise kuitaura. Mumitambo iyi, zvigumisiro zvinenge zvakafanana zvakananga nekukura.
Nzira ipi yekuwedzera kukura? Nzvimbo dzekukura dzemafupa emakore akawanda, ayo, chaizvoizvo, anobva paurefu hwomunhu, inowanzovharwa pakati pe18 nemakore 26. Dzimwe nguva kukura kunomira mberi - ku16 kana kunyange ku14. Izvozvo, zvisinei, hazviwanzoitiki. Kuberekwa kwepamberi kunobatsira pakuvhara kwepakutanga kwezvikwata zvekukura, sezvo mahomoni ezvebonde anokurudzira calcium kugadziriswa mutikiti uye kusvina kwavo. Gare gare kuberekwa, pane zvinopesana, kunowedzera nguva yefupa kukura murefu, nokuti nzvimbo dzekukura hadzivhari nguva refu.
Icho chiri chirevo che "bone age", iyo inogona kunge isingapindirani nepasipoti. Kuti atarise nguva yemafupa, x-ray yepakati yechitatu yezvigaro zvepamberi inotorwa (kuratidzwa kwechitatu ye distal). Kana mufananidzo wacho unoratidza neostosten cartilage yenzvimbo yekukura, ipapo kuchine mukana wepfupa kukura murefu. Kana iyi nzvimbo yekukura isati yatadza, zvino zvinoreva kuti vamwewo havana kusimba. Kusiyana pakati pepasipoti uye mapfupa emakore dzimwe nguva kunokosha.
Kana mudiki wemakore ane 16 ane makore mapfupa emakore 18, izvi zvinoreva kuti haafaniri kutarisira kuwedzera kukuru kwehurefu. Kana pazera remakore 16 gore refupa rinofananidzwa nemakore 13 (uye izvi zvinoitika kakawanda), ipapo kukura kwemasaga murefu kuchapfuurira kwenguva refu, uye kuwedzera kwekukura kuchave kwakakosha.
Muhuduku, kukura kwomwana kunogona kukurumidza kuburikidza nemubatsiro wepabonde zvepabonde rehutachiona, zvichirwisana nemamiriro ezvinhu ayo nguva nenguva ekurapa ne carnitine uye nicotinic acid inoitwa. Mukuyaruka, ikozvino ikozvino kunogoneka kubatanidza mushonga pamwe nesatotropin. Dambudziko rega rekuyeuka ndiro njodzi yekurasikirwa nechirwere cheshuga. Mukuyaruka, zvakanyanya kunyanya. Kuti uongorore dambudziko rinogona kuitika, zvakakosha kuita ruzivo rweropa rwakakosha uye urinho yerukari pamwe nekugadzirwa kweiyo inonzi "shuga".
Muchidzidzo chekushuga kweropa kunofanira kutakurwa mupfungwa kuti inogona kukura nekunamata. Nokudaro, miedzo inoitwa mangwanani-ngwanani mushure mekurara kweusiku uye, hongu, pane dumbu risina chinhu.
Chisarudzo chekupedzisira pamusoro pokusavapo kwekushushikana nechirwere cheshuga mellitus chinogona kungoita nyanzvi mushure mekunyatsoongorora.
Pamusoro pekukosha kwechimiro chekuberekwa kwemashoko, zvinokosha kunyatsorongedza mitsara yese yehama yekuvapo kwechirwere cheshuga. Chokutanga pane zvose, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kune munhu anotakura chirwere cheshuga 1 (insulin-inokonzerwa nechirwere cheshuga). Hazvisi nengozi kuti uve nechirwere cheshuga cheshuga (kwete cheshuga-chinotapira chirwere cheshuga, kana kuti "ane utachiona hwehushuga") mumhuri.
Kana paine pasina kupesana, iwe unogona kutanga kuiswa kwekukura kwehomoni, asi munyaya iyi inobatsirawo nguva nenguva kuedza kuongorora ropa, kusarudza shuga yekuvhara.
Sezvo muviri wechidiki uchikura, pasi pekuita kwe, kutanga kwezvose, zvepabonde uye, panzvimbo yechipiri, mahomoni ehutachiona, skeleton inosiyanisa. Mafurotiginous kukura munzvimbo dzishoma zvishoma zvakaderera uye dzakavharwa. Ikoko kunouya ossification yakakwana, uye kuwedzera kukura kwemasaga murefu hazvibviri.
Anti-androgenic zvinodhaka zvakadai se flutamide, cyproterone acetate, finasteride, epristeride, uye permixon zvinoshandiswa kuderedza kusiyanisa kwemafupa uye kuvhara nzvimbo dzekukura mumurume. Asi chete inofanira kushandiswa zvakanyatsogadzirirwa pasi pekutarisa kwemazuva ano kune unyanzvi ane ruzivo, uye kunyange zviri nani, chirongwa chekutanga chekurapa chinofanira kuitika mumamiriro ezvinhu.
Kuwedzera hormone mukati mawoga hakuiti kukanganisa skeletal kusiyana uye hakutungamiri kuvhara nguva isati yasvika yekukura kwenharaunda.
Somatotropin mishonga inogona kuitwa kwenguva yakareba, kwemakore, kusvikira kusiyana kwemafupa kuchipera, uye nzvimbo dzekukura dzakapfigwa. Unogona kuitora zuva rimwe nerimwe kana rimwe zuva rimwe zuva. Vamwe vatsvakurudzi vanokurudzira kuti panguva yekukura kwechimiro, somatotropin inotarisirwa 1 nguva mumazuva e3 kuitira kuti isakonzera kukanganisa kukuru uye kuumbwa kwezvirwere kumishonga.
Desi shoma ye insulini (mukati me4-14 IU, zvichienderana nehutano hwemuviri) inoita kuti HGH iite mishonga.
Nokuda kwekuzadziswa kwakakwana kwechiito che somatotropin, chinotungamirirwa kubva kunze, zvinodiwa kuchengetedza zvakakwana mamiriro ese ari pamusoro apa ekushandiswa kwekuita basa, kurara, kudya kwemaitiro, kuvhudzira, kutonhora zvinhu, marwadzo ekurwadziwa kwemvura uye kuenzanisa nenyota yekushaya nenyota . Chero pane zvakakosha zvepanyama, pharmacology inobatsira.
Kushandiswa kweHGH mukurapa
Kushandiswa kweHGH mukurapa kwakatanga nekurapwa kwepituitary nanism kana kufanana. Panenge panguva imwe chete, vakatanga kutora shanduko shoma shoma, iyo, chaizvoizvo, inongova yakasiyana-siyana. Gare gare vakatanga kutora somatotropin kunonoka kukura kwepfungwa uye zvepabonde, zvirwere zvinowanikwa mucheche vasati vasvika. Uyezve, somatotropin inoratidzirwa kwete chete nekunonoka kwekukurudzirana kwepabonde, asiwo nekukurumidza kufambira mberi kwepabonde, apo nzvimbo dzekukura dzemafupa dzinoswedera nokukurumidza.
Izvi zvinoitwa kuitira kuti mutumbi muduku uwane "nguva" yekukura zvisati zvaitika kuti nzvimbo dzekukura dzipfigwe nekuda kwekugadzirwa kwemakemikari ekurara.
Sezvo maitiro akanaka aHGH pamasaga akawanikwa, kuedza kwakagadzirwa kurapwa nekukuvadzwa kwakakomba kwezvigadziri zvemagetsi. Yakawanikwa kuti neHGH kurapa, zvose kukuvadzwa kwepamuviri, kukuvadzwa kwezvikamu zvikuru uye zviduku zvakaporesa kazhinji 2 nguva nokukurumidza.
Kana pfupa rinogona kuporeswa nokukurumidza nokukurumidza chero anibolic zvinokonzera, iko kukanganisa karoti chete kunopindura kune somatotropin mishonga. Kushamwaridzana (senitivity) yetikititi yetikititi kune somatotropin yaipfuura nguva 100 kupfuura yeanabolic steroid, adaptogens uye insulin. Kunyanya zvakanaka migumisiro yakawanikwa kuburikidza nekubatanidzwa kwemaatotropin nemadekisi maduku e thyrocalcitonin, hormone yekemikari uye glande yepathyroid, iyo inokurudzira kugadziriswa kwekasiki mumatumbu uye, kutanga kune dzose, mumapfupa.
Anabolism of soft tissues, incl. uye muscular, zvinogoneka kusimbisa insulin yakawanda kupfuura mamwe mazhenje. Nokudaro, mukukuvara kwakakomberedzwa, apo mapfupa, ligaments, cartilage nemasumbu zvakashata, kusanganiswa kwe somatotropin, thyrocalcitonin uye maduku maduku e insulini yakakosha, iyo, kunze kwezvose, inogona kukonzera mhinduro ye somatotropin. Nhasi, thyrocalcitonin iripo mumakambani emakemikari mune mishonga yemishonga mitatu:
1. Synthetic calcitonin, yakafanana neyomunhu thyrocalcitonin; 2. Miacalcin - inogadzira thyrocalcitonin, yakafanana ne thyrocalcitonin yearimoni. 3. Calcitrin - chirwere chinobva kuhutachiona hwezvirwere zvevenguru. Zvose zvitatu zvinodhaka zvinogona kutarisirwa pasi pfupi, intramuscularly uye intranasally kuburikidza nekuisa mukati mumhino.
Mukurapa kwekukuvara kwakakomba, zvakataurwa kuti HGH inoderedza kuwedzerwa kwe phosphorus uye calcium mumuginho, zvichiita kuti vagadzikane mumapfupa, kusanganisira uye muhutu hwemazino.
Izvozvo zvinokonzerwa neHGH zvakashandiswa zvakajeka mukurapwa kwechirwere chinopisa, apo munhu anofa kubva pakurasikirwa kweproteine ​​uye electrolytes kuburikidza nechironda chinopisa. HGH yakaratidza kuva yakanakisisa kurapwa kwezvironda zvepamu uye mumatumbo. Pasi pemutungamiri wake, kubuda ropa kunomira, maronda aya anoporesa nokukurumidza.
Nekubatsirwa kweHGH, zvaive zvichikwanisa kuporesa zvirwere zvemazino zvisingaiti zvekugadzirisa kuratidzira, zvakadai se periodontal chirwere, somuenzaniso.
Kuora mwoyo, chiropa uye zvirwere zvepfungwa, trophic zvinodhaka - iyi haisi nhoroondo yakakwana yezviitiko apo somatotropin inogona kushandiswa zvinobudirira.
Kushandisa somatotropin mune zvemitambo
Iwabolicous effect ye somatotropin yakazarura nzira yakawanda kumishonga yemitambo. Kwemakumi emakumi emakore asati ataurwa kuti doping, yakatove yakashandiswa zvikuru munenge mitambo yese. Chokutanga pane zvose, kushandiswa kwema somatotropin mukuvandudza tsika mukurapa kwemigumisiro yekukuvara uye kupindira kwokuvhiya kunofanirwa kutarisirwa. Miti yemitambo yemunhu yakagara iri uye inoramba iri pfupfupi (kunze kwezviitiko zvakakosha). Saka, nguva iyo mutambi ane ruzivo rwakanyanya kurasikirwa nekurapa kwekukuvadzwa (zvose zviri kushanda uye zvakachengetedza) zvinofanira kuderedzwa.
Ukuwo rumwe rutivi, chikamu chakanyanya kusimba chemusculoskeletal system is cartilage. Cartilage masero kubva muzera re16 anorasikirwa nekugona kwavo kugovana. Cartilage pachayo haitombogadziri zvakakwana kubva mukukuvara. Nokudaro, kukuvadza kwega kwe intervertebral disc, meniscus, cartilage pamusoro pekubatana ndiko kukuvara nekusingaperi, zvisinei kuti zvinosuruvarisa sei kuzvibvuma. Chikamu chekatetilage masero anotanga kuwedzera mukupindura kwekukuvadza (kugadzirisazve kuchinja). Zvisinei, izvi hazvirevi zvakanyanya kukanganisa kwetikiti, iyo 97% inomiririrwa nedzimwe sendiza.
Kune rumwe rutivi, tinoziva kuti somatotropin chete inogona kukanganisa zvakanyanya martitilage tissue (100 nguva dzakasimba kudarika dzimwe vanabolic agents). Uyezve, HGH inokanganisa masero ose uye zvimwe zvisikwa zvepluscellular panguva imwe chete. Izvi zvinoita kuti zvive kurapa kwakakosha uye, kunyanya kukosha, kudzivirira kwekukuvara kwemitambo. Zera rakapfeka goroti chinhu, zvinosuruvarisa, hazvidziviriki. Kunyange kana pasina kukuvadza kwakanyanya kwemashure, panguva yekuti muviri unoremekedzwa, meniscus inokura - kutyorwa kwetrophism yezviputika.
Kurwisana nemamiriro ekuma meniscus nyore nyore kukuvara kwose kwekuitika kunotevera. Kunyange kana pasina hukuvadza kwakanyanya kwe intervertebral discs, osteochondrosis inokura nezera - chironda che intervertebral discs pamusana pemagariro anowanzogadzirisa mutoro. Vatambi vakawanda vanosiya mutambo nekuda kwekukuvadzwa kwenguva yakawanda vasati vanyatsogona kuita. Kuti udzoke nguva ino, pamwe nekudzivisa kusimbiswa kwemazuva ose ane chokuita nehutachiona hwehutano, willy-nilly, unofanira kutarisirwa, zvikurukuru yetikiti.
Sechiremba, ndinotenda kuti somatotropin inofanira kushandiswa zvakanyanya sezvinobvira, nokuti nekubatsira kwako haugoni kungovaka musumbu. Somatotropin inobatsira pakukura kwekutsungirira, ine simba rakakwana rinoshanda. Nokurapa somatotropin, kupora kubva pamabasa akawanda zvakanyanya kunokurumidza.
Pakutanga uye kushandiswa kwakapararira kwema somatotropin mumitambo yezvimitambo kuchadzivirira kuunganidza kwe microtraumas, kupfeka kwemazera emakore e-articular-ligamentous device uye, pakupedzisira, kunodzivirira kukuvara kwakakomba.
Mune mishonga yemakiriniki uye yemitambo, apo mukurapa karotira kukuvadzwa, kusanganiswa kwe somatotropin ine madekisi ediki e insulini uye thyrocalcitonin inoshanda zvikuru.
Nekuremekedza mishonga yemasumbu, somatotropin haina kuratidza simba rakadaro se insulin uye anabolic steroid. Zvisinei, chete somatotropin inogona kukonzera kuwedzera kwehuwandu hwemasikisi, asi dzimwe dzose vanabolic agents dzinokonzera hypertrophy chete yemafuta aripo, pasina kuchinja nhamba yavo.
Kuwedzerwa musimba mashoma nekuderedza mafuta, HGH yakasiyana zvakasiyana nesteroid uye, zvakare zvakare, kubva kune insulini, iyo imwechete pamwe nekuwedzera kwemaviri emusumbu inokonzera kuwedzera kwemafuta mashoma. Nguva dzedzidzo dzehutano ne somatotropin dzinodiwawo pakusimbisa majoka-gumbo.
Mune mitambo iyo inoda simba rakasimba, somatotropin inoshandiswa zvakanyanya sezvinoitwa mumitambo iyo musimba hypertrophy inodiwa. Kana tikatora, somuenzaniso, mitambo inonyanya kutaura - marathon runomhanya, ipapo somatotropin inoshandiswa zvikuru kwazvo.
Izvo zvinoita kuti hutachiona hwemutsipa wemwoyo, hudzivirire intervertebral discs, menisci nemagamente kubva kuma microtrauma. Nhamba ye mitochondria mukati memusero inowedzera, nokuti pasi pekuita kweHGH, vanokwanisa kuzviparadzanisa voga uye vanova vakuru pakukura. Kuunganidzwa kwemafuta emafuta anobva kumafuta mashoma uye kushandiswa kwavo kwezvinoda simba kunowedzera. Kuwedzerwa simba, zvakare, kunobatsira pakuprotini-synthetic michakato.
Pasinei nokuti chokwadi chekuti somatotropin uye somatomedin C dzinotumidzwa ku doping, hazvigoni kutarisa kuwedzera kwezvinhu zviri mumuviri. Iyo hafu-hupenyu hweHGH, inoiswa mumuviri kubva kunze, mumunhu ane hutano ndeye 20-30 maminitsi chete. Kuwedzera kwehuwandu hwe somatomedin C yakatsanangurirwa kwete kupfuura zuva. Tichifunga kuti zvinyorwa zveHGH uye somatomedin C mumuviri zvinogona kuchinja zvakapararira zuva rose zvichienderana nekunetseka, kushanda kwenyama, nezvimwe zvakagadziriswa neHGH neGG-1 mutambi mumuviri mushure mokukwikwidza, pamwe chete mushure mekunge mushure mokukwikwidza, inopokana zvikuru.
Nzira dzekutsanangura mazinga eropa aHGH neGF-1 ndeawo anonyanya kufarira, kwete sekuedza kwekuita doping, asi sekuongororwa kwemutambi wezvakakosha uye kuchengetedza masimba. Nokudaro, zvinogoneka kuziva kana mutambi anopiwa anoda humwe hutungamiri hweHGH. Kana zvakanyanya kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwemashoko (magwaro anokuvadza) zvakakwirira zvakakwana, zvino zvinonzwisisika
kuti titeerere kwete kuwona somatotropic basa rekunyengera kwepituitary, asi kune dzimwe nzvimbo dzekutsinhanisa.
1. Maitiro emusununguko ekugadziriswa kweHGH anobva pakuonekwa kwezvirwere kuti ave somatotropin muropa revanhu. Izvi zvinoitwa uchishandisa:
kubhara kwemaitiro ekudzivirira hemaghotinization;
kubatanidza kugadzirisa kugadzirisa;
Munyika dzakawanda, makirati akaenzana ekugadzirisa mahomoni (kusanganisira HGH) muzvigadzirwa zvehupenyu zviripo.
Mukuita, nzira dzekuzvidzivirira kwemuviri dzekugadzirisa kweHGH dzakanga dzisingagoni kururamisa tariro dzavakapiwa kwavari. Uye kune zvikonzero zvakawanda zveizvi. Chokutanga, maererano nehutachiona hweHGH kurapa, zvishoma zvirwere zvinorwisana nazvo, uye mushure mekuregererwa kwekurapa vanonyangarika kubva muropa. Chechipiri, chikamu chehomoni inosungirirwa kune anorifuta uye chikamu chehomoni inoratidzira vanabolic, haikwanisi munzvimbo yavo mu molecule. Nokuda kwezvikonzero izvi, nzira dzekudzivirira muviri dzinogona kusarudzira kupfuura 10% yeHGH iri mumuviri.
2. Nzira dzehupenyu dzekutarisa HGH dzinobva pakuyera zviitiko zvinokonzerwa neHGH. Iyo huru ndeyokuti:
Muedzo wekurema muhomwe muhove dzakanaka.
Muedzo wekurema muhomwe.
Edza kuwedzera kwehurefu hwomuswe mumakonzo anokwidziridzwa.
Tibia muedzo (mhinduro yeHGH mukuwedzera hupamhi hwefupa remapfuti).
Nzira yekukurudzira basa re enzyme ornithine decarboxylase yechiropa.
Nzira dzekusimudzira shuga kutakura mune imwe tsanga yakasarudzwa mumakonzo anonzi hypophysectomized.
Edza kuitika kweHGH paropa urea.
Edza kuitika kweHGH pane masero mashoma.
Muedzo unosimudzira kushandiswa kwe radioactive sulfate muhututi.
Chiyero chinokurudzira kushandiswa kwe uridine mu thymocyte RNA.
Chiyero chinokurudzira kushandiswa kwemhepo yakasvibiswa mumhepo inopinda muchechi.
Zviratidzo zvehupenyu zvakazviratidza zvakanaka mune zvidzidzo zvezesayenzi, asi nekururama kwavo kwose hazvigamuchirwi mukugadzirisa huwandu hweHGH muropa sekuedza doping.
Kamwe zvakare ndinonyora pasi pfupi boka rekusimudzira miedzo yekusimudzirwa kweHGH secretion, iyo inoshandiswa kuongororisa simba rekuchengetedza gland pituitary:
Edza ne insulini. Kuwedzera zvakavanzika kweHGH mukupindura kwe insulin hypoglycemia inogadziriswa. Nekuiswa kwe insulin mune / mune imwe chirwere che 0.1 u / kg. Nekuderera kwegorosi yezinga ne50%, kukosha kweHGH muropa kunowedzera ne 2-3 nguva.
Edza neArginine. Arginine inoshandiswa mukati-kati kune imwe nhamba ye 0.5 g / kg kwemaminitsi 30. Kazhinji, chiyero cheHGH chinowedzera ne3 nguva.
Sample naL-DOPA (dopamine precurse). Inopinda mukati mumutengo we 500 mg. Nhamba yeHGH inowanzowedzerwa ne 3-4 nguva.
Edza ne glucagon. Kubudiswa kweglucagon pamusana we1 mg kunowedzera kuchengetedzwa kweHGH 1.5 nguva. Mhinduro kune glucagon inogona kuwedzerwa nehutungamiri hwepropranolol (anaprilina).
HGH secretion kuderedza samples inoshandiswa zvakare:
Edzai nehuga. Mushure mokutora 100 g ye glucose, chiyero cheHGH chinoderedzwa ne 2-2.5 nguva dzinofananidzwa nechinangwa.
Test with somatostatin. Kubva pahuwandu hweHGH secretion nekugadzira somatostatin.
Iko kunewo boka re somatomedin-based tests.
Kukura kwevanhu hormone nekenza
Pane chinhu chakadai se "musimboti wekenza" kana kuti chirevo chezvipfeko zvinosvibisa. Izvi zvakagara zvakagara nhaka zvakasarudzwa kunze kwezviitiko zvisingawanzoitiki. Vanhu vane chimiro chezvipembenene zvinotapira zvinowanzoitika kune vamwe vanoita migumisiro mikuru mumitambo, uye nokuda kwechikonzero chakanaka.
Chokutanga, mapuroteni emuviri wevanhu vakadaro anoshanda zvikuru kupfuura mumuviri wevanhuwo zvavo. Kune rumwe rutivi, izvi zvakanaka kwazvo uye zvinoita kuti zvive nyore kuvaka musimba mashoma, uye kune rumwe rutivi, mishonga inokurawo nokukurumidza kudarika vanhuwo zvavo. Chechipiri, simba ravo rekugona rakakwirira kwazvo kudarika simba revanhu revanhu. Fatty acids inoshandiswa nyore nyore uye inopfuura vamwe vanhu. Asi iyi medalina ine maviri maviri. Dzimwe nhengo dzekuchengetedzwa pamwe chete kuitira kuti vadye masero anouraya anotanga kudyisa pamadonhwe maduku emafuta, nguva dzose aripo muropa, kana mafuta acids.
Zvisinei, vanorega kuita mabasa avo chaiwo - kutsva nekuparadza masero akaipa.
Mitambo yemasikirini inoshandiswa nevose. Uye avo vane chirwere chekenza uye avo vasina. Zvisinei, avo vane chirwere chekenza vanogona kuwana zvikwereti zvakanyanya mumitambo, kunyanya kana vakabatana nekuvaka musuru.
Chimiro che thymus gland chinokonzera mishonga (antiticancer) immunity. Iyo yakawanda mashoma e thymus ine panguva yekuzvarwa kwomwana. Zvadaro zvinotanga kuderera zvishoma nezvishoma uye nezera re40 rinenge risati rapera zvachose. Parizvino vanhu vakawanda vanotanga kukura zvipembenene zvinotyisa, izvo mushure memazana mashoma makumi emakore zvichikura kukura.
Vatambi vane masimba vanowanzouya kwandiri kuti vawane mazano nemubvunzo uyu: "Handikuvadzi somatotropin here, nokuti ndakanga ndine zvirwere zvinotyisa mumhuri mangu?" Kutya kwavo kunokonzerwa nokuti yese mirayiridzo yekushandiswa somatotropin inoratidza kuti zvinopesana nezvirwere zvinotyisa. Hapana munhu akaedza kuongorora uye hapana somatotropin yakashandiswa kune vanorwara nekenza. Icho chinongova chekutanga kuti hormone inokura inofanira kunge inowedzera maharaplasms emuviri, sezvo ine simba rakakura rakakura. Nokuda kwechimwe chikonzero, hapana anonyora nezvevanabolic steroids uye androgens, kunyange zvazvo vanabolic effect muzvidimbu zvakakodzera zvingawedzerwa nevanabolic effect ye somatotropin.
Saka ndeipi mhinduro? Ko, somatotropin inogona kushandiswa nevatambi vane chirwere chekenza here kana kwete? Mhinduro yacho ichava yakawandisa.
Pazera remakore (kunyanya kusvika kumakore 30), kushandiswa kwekukura kwehomoni hakusi kungozi chete, asi kunoda. HGH ndiyo chete inowanikwa iyo
inokonzera hyperplasia (kukura uye kubereka) yemasero ezvirwere zvemuviri. Yokutanga ndiyo masero e-thymus gland, iyo inokonzera kushungurudzwa kwezvirwere. Iyo yakawanda yeHGH inoshandiswa pazera remakore, iyo yakakura ye thymus yevanhu uye inotevera nguva inosvika apo masero anonyangadza anotanga kukura mumuviri.
Hapana imwe shanduko inonyanya kuwedzera kukura kwe thymus gland ikozvino isingazivikanwi nesayenzi.
Kana munhu atotopfuura 40, zvino pane mukana wekuti kuumbwa kwechirwere chinouraya chakatotanga kune imwe nzvimbo mumuviri, sezvo thymus gland inenge yaparadzwa zvachose uye mishonga (antitumor) chirwere chisina simba. Iye haazviratidzi pakarepo. Ivhareji yekenza inokura mumunhu kubva ku20 kusvika kuC40 yemakore uye inoonekwa, ichive ikozvino pachikamu chekupedzisira chekuvandudzwa kwayo. Pazera iri, kushandiswa kwe somatotropin kunogona kunge kune ngozi. Ichaita kuti kuve nekukura kwechirwere, kana chave chiripo.
Vanhu vasina muganhu wekenza, avo vasina kufa nekenza mumhuri, vanogona kushandisa somatotropin sezvinodiwa chero panguva ipi zvayo: vose vaduku nevakuru.
Kune vanhu vane chirongwa chekenza, kune ngozi yakawanda zvikuru kupfuura somatotropin. Aya ndiwo androgens uye anabolic steroids. Ichokwadi ndechekuti androgens, kana yaiswa, inokonzera kutsanya kwazvo (dzimwe nguva kunyange mukati mavhiki mashomanana) kushandiswa kwe thymus gland. Anabolic steroids, kunyange zvazvo zvishoma, inewo zvakafanana.
Kunyange vanhu vasina kenza yemutemo vanogona kuwana kenza mushure mokushandisa uyerogens kuvaka musumbu. Vanhu vane chirongwa chekenza uye "vakagara" pa androgens vari kungozviuraya bhomba avo vanongokurumidza kupedza kuguma kwavo. Uye pfungwa iyi haisi kuwedzera mapuroteni, asi mukuparadzwa kwechikamu chikuru chemuviri wedu wechipinha - thymus gland. Nokuda kwezvikonzero izvi, sechiremba, ini ndiri mutevedzeri wemitemo yekushandiswa kwe androgens kuitira kuvaka musumbu.
Kushandiswa kwevanabolic steroid inofanira kushandiswa nekushandiswa kwekura hormone. Kushandiswa kwakadaro kwekukura kwehomoni uye vanabolic steroid inogonawo.
Vamwe vatambi vanopindura uye vanorera zvakasimba zvakasimba kupfuura steroid uye musimba mashoma uye androgens inokura nokukurumidza. Zvisinei, mutengo waunofanira kubhadhara nokuda kwekukurumidza kukurumidza musimba mashoma yakanyanya kukwirira.
Parizvino, tine sarudzo yakakura yemashambadziro akasiyana-siyana, ayo maviri ari akasimba kupfuura androgens. Chimwe chezvinhu izvi zvinoreva - somatotropic hormone pamwe chete nevashambadziri vakasiyana-siyana.
Matarisiro ekufambiswa kweHGH
Zvose zviri kuvandudzwa. Mumusika wemitambo yemasitorike, zvinowedzera uye maitiro matsva ekukura kwemishonga inodhaka inooneka. Mukuwedzera kune vanhu, mageneji ekugadzira uye kugadzirwa, tsika yekuwedzera yehomoni yakaonekwa, iyo inowanikwa pamasangano ehuwandu chaiwo.
Zvinosuruvarisa, mutengo wekukura kwemishonga hormone inoramba ichikura uye izvi hazvikwanisi kune chero upi zvake hwehutano kana hwehutano. Izvi zvinokonzerwa chete nekuti chido chemuropa chinowedzera. Munhu wese anonzwisisa hupfumi zvishomanana achakutaurira kuti mutengo wokutengesa unongotarisana nehuwandu hwekuda kwechigadzirwa uye hapana chimwezve.
Pasinei nemari yakaderera zvikuru mukugadzirwa kwezvinhu, HGH zvirongwa zvicharamba zvichiwedzera mumutengo nekuda kwekukura kwehuwandu hwezvido zvavo.
Mumamiriro ezvinhu aya, hazvingakuvadzi kubhadhara nzira dzekuwedzera zvinyorwa zve somatotropin mumuviri, izvo zvisingabatanidzwi nemajojo ezvinodhaka kubva kunze.
Genetically engineered somatotropin, pamwe chete neine genetically-injected insulin, inowanikwa kubva kune Escherichia coli chaiwo, mumutauro we genome uyo gweta re somatotropin synthesis yaiva "wired". Iyi Escherichia coli inoumba zviri mumatumbo ako uye inobvumirana pamwe chete nemuviri.
Ive yakagara ichishandiswa nzira dzekukomberedza kwemukati yevanhu ane tsvimbo inobereka insulini. Iko kune kare vanhu vakawanda munyika iyo havadi kuvhara insulin, asi vanoiwana kubva mumatumbo avo. Izvo zvakafanirwa kwenguva yakareba ne somatotropin. Mabhiriyoni emudumbu, kubva kune mazita emagetsi anonzi somatotropin anowanikwa, anogona kunge akagariswa mumuviri wevanhu chero nguva ipi zvayo yakakodzera uye, kana zvichidiwa, akabviswa nyore nyore. Chimwe chinhu hapana munhu arikurumidza kukura nekusimudzira nzira iyi. Zvinonzwisisika.
Vanhu vachangotanga kugoverana HGH-inobudisa E. coli mumwe kune mumwe, uye ipapo zvigadzirwa zvose zvemishonga zvichava zvisina kufanira. Zviremera zvemishonga makuru hazvizoregi kurasikirwa, uye vachaita zvose zviri musimba ravo kuviga nzira iyi nekusingaperi. Zvisinei, zvichida tinewo mukana. Mumwe munhu kuitira kukwikwidzana achakanda pamusika unhu husina kuwanda hwebhakitiriya hunobereka HGH.
Imwe nzvimbo inofadza ndeyekubatanidza (kuiswa) kwema embryonic buds we anterior pituitary nemasero eosinophilic.
Kana zvakasvibirira mushure mushure mekugadziriswa zvinorambwa nehutachiona hwemunhu uyo ​​maikisi aya akashandurwa, mbeu dzechirimwa hadzisi. Vanotanga midzi mumutumbi wemunhu wavakanyorerwa. Kugadzirwa kwemazuva ano kunokubvumira kudzorera munhu kana kwete yose, ipapo inenge zvose zvese. Kunyangwe zvipembenene zvemazino zvemazino zvinoshandiswa uye mazino emukaka anokura panzvimbo yekugadzirwa uku.
Zvaive zvichiitwa, uye kusvikira nhasi, kuchinja kunoitwa pamumvuri wemumhondoro we anterior pituitary gland, iyo inotora midzi, inokura mumasikirwo akaenzana, uye inotanga kuvhara HGH. Izvo zvakanyanya kunaka, mumaonero angu, kuita zvipembenene zvakadai pasi peganda, sezvo masero akaiswa mukati anogona kubviswa nyore nyore kubva pasi peganda panguva yavasingazodiwi, kana chakavanzika HGH gene inotanga kubudisa chero migumisiro .
Mune mhuka dzinoedza, kupindira kwemakemikari emishonga kubva kune anoreior lobe wepituitary zvakananga mu hypothalamus zvaitwa. Mushure mekufamba kwakadaro, "kuwedzera" kuchengetedzwa kwemasitotropin kwaive kwakaenzana nekuenzaniswa kune dzimwe nhengo nezvikamu zvemuviri. Izvo zvisingabatsiri zvekushanda kwakadaro ndezvokuti hazvingakwanisi kubvisa mavara kubva kune mamwe masero eosinophilic kubva kune hypothalamus.
Zvinyorwa zvoumbrioni zvezvikamu zvakasiyana-siyana zvinotorwa kubva pane zvakasununguka kubvisa pamuviri. Saka munei, uye nhamo, hatina kumbova nekushayikwa mairi. Hasi dzose dzinovhiringidzika dzinogadziriswa dzinotanga midzi, dzakawanda dzadzo dzinobatwa shure kwekushandura. Kuti arambe achivandudza maitiro akafanana, akatanga kutora embryonic rudiments yakakurira mu test tube. Baba kana amai vemamai embryos aya munhu anoda kuiswa. Mazhinji embryo anofa mu vitro, asi vamwe vachiri vapenyu uye zvigumbuso zvemumumvuri zvezvikamu zvavo zvinopera zvishoma zvishoma mushure mekugadziriswa.
Sezvine biotechnology sezvinoitwa nesayenzi, inyanzvi yayo inofanirwa nekugadzira embryonic buds ichakura uye ndinovimba saizvozvo. Iyi nhungamiro inoratidzika kwandiri kwandiri yakavimbisa zvikuru.
Vakawanda nokuda kwekunyorerwa kwechinyorwa chacho, zvinhu zvebhuku rinonzi Y. Bulanov